Frequently asked questions on how to prevent and manage Covid-19 infections in the workplace - isiXhosa | Covid-19 Response
Frequently asked questions on how to prevent and manage Covid-19 infections in the workplace - isiXhosa
Amashishini, anike ingxelo echanekileyo yeCovid-19 kwindawo yokusebenza kwiSebe lezeMpilo leNtshona Koloni ngale fomu ekwi-intanethi.
Ukuba ukholelwa ekubeni ishishini alizilandeli izikhokelo zempilo kwindawo yokusebenzela ukunqanda ukunwena kweCovid-19, ungakuxela oko ngokusebenzisa le fomu ekwi-intanethi.
Sikholelwa ngamandla ekubeni okuba oku kwenziwe ngendlela enenkathalo, uqoqosho eNtshona Koloni lungavuleka ngelixa kuthintelwa ukunwena kweCovid-19, ngako ke sizimisele ukuwaxhasa kulo lonke ixesha lale ntlekele.
Ezi zikhokelo zilandelayo sijolise ekuncedeni ishishini ekuphumezeni amanyathelo afanelekileyo wezempilo nokhuseleko ukunqanda ukunwena kweCovid-19. Cofa apha ukudawunlowuda izikhokelo ezikwinguqulelo yePDF.
Nceda undwendwele icandelo lethu lezibonelelo ukufumana iiposta eziluncedo, uluhlu lwezinto ekufuneka zikhangelwe kunye nezibhengezo ezikhumbuza abantu ngezikhokelo zempilo ukunqanda ukunwena kweCovid-19.
Ukuthintelwa kolosuleleko lwentsholongwane ikhorona kwindawo yokusebenzela
Indlela enwena ngayo intsholongwane ikhorona
Intsholongwane yekhorona inokudluliselwa ngamachaphaza angamathontsi aphumayo xa umntu ekhohlela, ethimla, ekhwaza naxa ethetha. Xa abantu bekhohlela kwaye bethimla kuye kuphume amachaphaza angamathontsi athi awele ezandleni nakwiindawo okanye kwizinto ezibangqongileyo. Ize ke intsholongwane yekhorona isasazeke xa izandla zabo bantu ziye zabamba izandla zabany' abantu kwaye baphathe nezinto ezifana nemali, izibambo zamacango kunye neekhawuntara zeevenkile. Xa umntu eziphatha amehlo, impumlo kunye/okanye umlomo emva kokubmba izandla zabanye abantu kunye nezinto ezosuleleke yintsholongwane yekhorona, unokosuleleka. Intsholongwane ikhorona inokuphila kangangeentsuku eziliqela kwiindawo ekuzo.
Imithethosiseko emihlanu yokuthintela ukunwena kwentsholongwane yekhorona
Le ilandelayo yiMithethosiseko emi-5 yokuthintela ukunwena kwentsholongwane yekhorona:
1. Zahlule kwabanye abantu ube wedwa:
Ngokusebenza ekhaya apho kunokwenzeka khona
Ngokuhlala ekhaya ukuba awuphilanga
2. Ukubhekela ebantwini okunye nabo:
Gcina isithuba esingangeemitha ezi-1.5 (ubude beengalo ezimbini) uthe qelele kwabanye, xa kufuneka usebenza nabo okanye ubanceda.
MUSA UKUBULISA NGOKUBAMB' ISANDLA, okanye ngokongana, okanye ngokungqubanis' ingqindi, okanye ngokungqubanis' ingqiniba. Gcina isithuba phakathi kwakho nabany' abantu.
3. Ukuhlamba/ukusanithayiza izandla:
Hlamba izandla rhoqo ngamanzi nesepha kangangemizuzwana engama-20
Okanye uhlikihl' izandla ngesanithayiza yealkhoholi
Hlamba izandla emva kokubamba abantu, izinto kunye neendawo ezithile
4. Ukuziqhelanisa nokugcina ucoceko:
Khohllela okanye uthimlele engqinibeni okanye kwithishu uze uyilahle emgqomeni ithishu uze uzihlambe ngoko nangoko izandla zakho.
Musa ukuzibamba ebusweni ngezandla ezingahlanjwanga.
5. Ukusebenzisa imaski yelaphu:
Sebenzisa imaski yelaphu ukugquma impumlo nomlomo wakho
Musa ukuyibamba imaski emva kokuba uyinxibile
Yiyeke njalo imaski lonke ixesha, ngaphandle kwaxa ufuna ukutya okanye ukusela. Yisuse ngobunono imaski uyiubambe kwiintambo xa uza kutya/uza kusela uze uyibeke ephepheni okanye kwibhei yeplastiki ecocekileyo.
Amanyathelo okulungiselela indawo yokusebenzela kunye nabasebenzi
1. Yenza uhlolo lomngcipheko kwindawo yokusebenzela
Bandakanya uncedo kubasebenzi bezempilo nokhuseleko emsebenzini ukuba bakhona. ; ukuba abakho, kufuneka uqwalasele ukonyula omnye wabasebenzi ukuze asebenze keli nqanaba ukuqinisekisa imigca ecacileyo yonxibelelwano noxanduva.`
Chonga iindawo apho abantu banokuthi banxibelelane kuzo kunye nakwiindawo apho unxibelelwano phakathi kwabantu kunye nezinto lunokwenzeka khona.
Umba ngamnye wala manqaku wenza amanyathelo afanelekileyo okunciphisa unxibelelwano kunye nokubulala iintsholongwane emva konxibelelwano.
Cinga ngezi ndawo zingundoqo zilandelayo:
Amasango okuNgen' aBasebenzi
Amagumbi okutshintsha, amagumbi eeLokhari
Amasango okuNgen' aBathengi
Iindawo zokunik' iinkonzo kubathengi
Igumbi lokutyela/lokuphumla labasebenzi
Indlu yangasese yabasebenzi
Indlu yangasese yabathengi
Indawo yokwamkela impahl' efikayo
Indawo yokugcin' inkunkuma
Cinga ngala manyathelo angundoqo alandelayo:
Ukucwangciswa ngokutsha iikhompyutha zokusebenza (imiphezulu yemigangatho, iidesika, izitulo, izixhobo)
Ukohlula abasebenzi ngokubeka iziphawuli emgangathweni eziyiteyipu okanye ipeyinti ukwenza izithuba eziyi-1.5
Ukubeka isanithayiza kunye neendawo zokuhlambela izandla
Amaxesha eti/esidlo sasemini ukwenzela kube yimpumelelo ukuchaselana kwabantu
2. Yenza uvavanyo lomngcipheko wabasebenzi kunye nesicwangciso senkqubo yomsebenzi
Bandakanya inkxaso yabasebenzi bezempilo nokhuseleko emsebenzini ukwenza uhlolo lomngcipheko wabasebenzi oya kuthi ichonge abasebenzi emngciphekweni omkhulu wokuba nesifo esiqatseleyo (umz. abantu abadala (abaneminyaka e- >60, abanesifo seswekile, abanesifo sesifuba, abanesifo sentliziyo, abanesinye isifo esinganyangekiyo okanye abnyangelwa ukuxinzeleleka kwamajon' omzimba) uze ubenzele amalungiselelo aba basebenzi wokuba basebenzele ekhaya, okanye basebenzele kwindawo enomngciphek' omncinci, okanye babekwe kwikhefu elikhethekileyo.
Chonga abasebenzi abanokusebenzela ekhaya uze ubavumele ukuba benze njalo.
Yakha iinkqubo zokusebenza kunye nobume bendawo yokusebenzela ukunciphisa ukudibana phakathi kunye nokudibana kwabathengi nabasebenzi
Babeke abasebenzi ngokwamaqela/iishifti ukunciphisa kwabo namanye amaqela/iishifti
Musa ukuba fudusela kwamanye amaqela/iishifti abasebenzi
Chonga abaphathi/abalawuli ukuhluza bonke abasebenzi xa befika bezoukuqal' umsebenzi ukufuman' iimpawu kunye nokuba sesichengeni sentsholongwane yekhorona.
3. Baqeqeshe abasebenzi
Baqeqeshe abasebenzi (noko) ngoku kulandelayo:
Indlela enwenwa ngayo intsholongwane yekhorona
IiMpawu zeNtsholongwane yeKhorona
Yintoni ekumele yenziwe xa kukrokreleka ukuba baneNtsholongwane iKhorona kwaye bakhuthazwe ukuze kwaziswe indawo yokusebenzela malunga neempawu ezikhoyo okanye ebebesondele kumntu onazo
Ngawaphi amanyathelo ekumele athathwe ukunqanda ukunwena kwale ntsholongwane
Inxitywa njani, ikhululwa njani, igcinwa ize icocwe njani imaski yelaphu nayo naso nasiphi na iSixhobo soKhuseleko (iPPE) esinokuthi sisetyenziswe
Ungaze wabelane ngeSixhobo soKhuseleko (iPPE)
Luphinde uqeqesho ngokuthumela imiyalezo rhoqo nangokubeka imiqondiso kunye neeposta ezifanelekileyo.
Izixhobo zonxibelelwano zokuthintela intsholongwane yekhorona zimele zixhonywe kwiindawo ezininzi kwaye zimele zibonakale lula. Ukuba awunazo ezo zixhobo, zingadawunlowudwa zize zishicilelwe apha: https://coronavirus.westerncape.gov.za/resources
Le webhusayithi ibonelela ngezixhobo ezingemisebenzi emininzi yothintelo, ukusuka ekusebenziseni iimaski, ukucocwa kweendawo, okumele ukwenza xa ugula, ukuhlala wedwa, ukuchasel' ebantwini, izitikha zemigca, ukuhlamb' izandla nokunye okuninzi. Uninzi lwezi zixhobo lufumaneka ngesiNgesi, isiXhosa ngesiBhulu kwaye inkoliso yazo ikwifomathi yePDF okanye yeJPEG ukuze kubelula ukuziprinta nokuzisebenzisa.
Kuyakhuthazwa ukusetyenziswa kwezixhobo ezinophawu lukarhulumente, nkqu nezinye izixhobo ezihamba nazo ezinophawu.
Ukuba unesibhengezo sasesidlangalaleni, umboko okanye esinye isixhobo sokuvakalis' isandi esifakelweyo (umz. irediyo yangaphakathi/umboko) wosebenzisele ukukhumbuza abasebenzi okanye abathengi malunga namanyathelo okhuseleko.
Ukuthumela rhoqo imiyalezo efana nale ikhuthazwayo ngasentla, kusebenza njengesikhumbuzo kubasebenzi/kubathengi, kuze kubenze bahlale besazi ngoncedo nangokuthobela amanyathelo okhuseleko.
Khuthaza indlela ebonakalisa unakekelo novelwano ukunciphisa ubekobala emsebenzini
4. Qinisekisa ukuba kukhona oku kulandelayo:
Isanithayiza yezandla yealkhoholi kwiindawo ezityunjiweyo
Cinga ngokunika umsebenzi ngamnye isanithayiza yezandla yealkhoholi ukuba kufuneka ajikeleze kwindawo yokusebenzela okanye xa kufuneka aphume ayishiye indawo yokusebenzela (umz. abaqhubi).
Iimaski zelaphu ezi-2 kumsebenzi ngamnye.
Kubonelelwe ngesanithayiza yezandla, isepha, iitawuli zephepha, imigqomo yenkunkuma engamaphepha kunye nezinye izixhobo zokucoca ezaneleyo.
Iiyunifomu ezongeziweyo okanye amalaphu okusebenza wabasebenzi
Igumbi lokutshintsha labasebenzi elifanelekileyo ukuze bakhululele khona impahla yokusebenza kwaye bazigcine ngokwahlukeneyo.
Ukunqanda ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona ngexesha lokusebenza kwindawo yokusebenzela
1. Ukuhluzwa kwabasebenzi yonke imihla
Abasebenzi kufuneka bakhuthazwe ukuba bangasondeli emsebenzini kwaye baye kwiziko lokuvavanyela intsholongwane yekhorona ukuba ngaba banezi mpawu zilandelayo.Iimpawu ezikrokrelisa ukuba nolosuleleko lwentsholongwane yekhorona zezi:
Ingcebiso malunga neziko lovavanyo onokuya kulo zifumaneka kwinombolo yomnxeba weCOVID-19 kule nombolo 021 928 4102.
Ngokufanelekileyo abasebenzi kufuneka bazihluze ngokwabo kumakhaya wabo ngaphambi kokuba baye emsebenzini kwaye ukuba baneempawu kufuneka bafowunele bazise umphathi/umlawuli wabo.
Xa befika emsebenzini, bonke abasebenzi kufuneka bahluzwe yonke imihla nguqeshi ukuze kubonwe abanye abasebenzi abanokuba nazo naziphi na ezi mpawu zingentla.
Nawuphi na onazo ezi mpawu kufuneka angavunyelwa ukuba awuqalise umsebenzi. Kufuneka banikwe imaski yokuhlinzwa okanye imaski yelaphu, kufuneka bahlambe izandla, kwaye bathuthelwe kwiziko lokuvavanyela intsholongwane yekhorona.
2. Abasebenzi abaya emsebenzini
Xa abasebenzi behamba ngesithuthi sikawonkewonke okanye nangaso nasiphi na isithuthi esichongiweyo esifana neteksi okanye ibhasi, kufuneka bahlalele kude kwabanye abakhweli kangangoko kunokwenzeka.
Isithuthi akufuneki sigcwaliswe ngaphezulu kwe-50% yomthwalo waso wokulayisha, kwaye zonke iifestile kufuneka zivulwe ukwandisa ukungena nokuphuma komoya.
Abasebenzi kufuneka manxibe iimaski zelaphu ngawo onke amaxesha xa behamba ngesithuthi sikawonkewonke.
Kuya kufuneka bazihlikihle izandla zabo ngesanithayiza yealkhoholi phambi kokuba bangene kwisithuthi nasemva kokuhla kwabo kuso
Abasebenzi banokukhuthazwa ukuba bathathe indlela 'ungandichukumisi' xa bangena okanye bephuma kwisithuthi ngokusong' izandla.
3. Amasang' okungena kwindawo yokusebenzela
Sebenzisa isango elinye lokungena/lokuphuma kangangoko kunokwenzeka.
Musa ukubavumela abasebenzi ukuba bahlanganele kwisango lokungena/lokuphuma
Ukuba iingcango azizivulekeli/valekeli, ligcina livulekile icango apho kunokwenzeka khona ukunciphisa ukubanjwa kwezibambicango zalo ngabantu abaninzi. Apho oku kungenakwenzeka khona, cinga ngokubeka umsebenzi (umz. unogada) emnyango uze umyalele ukuba abavulele icango bonke abasebenzi/iindwendwe ukuqinisekisa ukuba azibanjwa ngabantu abaninzi izibambicango.
Abasebenzi kunye neendwendwe ezingena kwindawo yokusebenza zimele zisanithayize izandla xa zingena naxa ziphuma, ngakumbi xa bezibambile izibambicango.
Ukungena ngokusebenzisa iBiometric kufuneka kungasetyenziswa.
4. Ukuchaselana kwindawo yokusebenzela
Misela inani labantu kwindawo yokusebenzela (kuquka abasebenzi nabathengi) libe ngumntu omnye ngeemitha zezikwere ezi-6 (o.k.t. umgangatho mawohlulwe ngeemitha ezi-6). Eli nani livumela umgama womgangatho okunokubekwa kuwo amashelufu, izixhobo kunye nezixhobo ezifakw' evenkileni.
Nje ukuba kufikelelwe kwinani (umntu omnye ngeemitha zezikwere ezi-6), abantu bangavunyelwa kuphela xa abanye bephuma.
Hlengahlengisa ngokutsha izithuba zokusebenzela ukuze umsebenzi ngamnye akwazi ukugcina isithuba esiyimitha e-1,5 kwabanye (abasebenzi/abathengi).
Ukuba akunakwenzeka ukunhlengahlengisa ngokutsha iindawo zokusebenzela, nciphisa inani labasebenzi emsebenzini ngokujonga ukuba ngabaphi abanokukwazi ukusebnzela ekhaya kwaye/okanye uhlengahlengise ngokutsha iipemithi zokusebenza ukuze abasebenzi bakwazi ukusebenza ngokweeshifti/batshintshane ngeentsuku.
Apho kunokwenzeka khona, abasebenzi kufuneka kufuneka bangabelani ngeendawo zokusebenzela okanye basebenzise izixhobo ezinye. Nceda ukhumbule ukuba ikhompyutha kunye nezixhobo ekwabelwane ngazo zimele zicocwe phambi kokuba zisetyenziswe ngaba basebenzi babelanayo/batshintshiselanayo.
Banqande abasebenzi ekubeni badibane naye nawuphi na umsebenzi ngokubagcina besebenza ngokwamaqela amancinci kwaye bangavudukeli kwamanye amaqela/iishifti.
Kuphephe ukubulisa/ukubamban' izandla, ukongana nako nakuphi na ukudibana ngokomzimba nabanye abantu. Babulise ngoncomo abantu, okanye ngokunqwala, okanye ngokuthob' intloko, okanye ngokuphakamis' isandla.
Cutha ukuhambahamba kwabaphathi nabalawuli phakathi kweendawo zomsebenzi nalapho kunokwenzeka khona. Xa kufuneka batyelele kwindawo yokusebenzela kufuneka bakuphephe ukubamba imiphezulu yemigangatho.
5. Amasango okungena abathengi kwindawo yokusebenzela
Sebenzisa isango elinye lokungena/lokuphuma kangangoko kunokwenzeka ukuncedisa ukulawula ufikelelo
Ukuba iingcango azizivulekeli/valekeli ngokwazo, zigcine zivulekile apho kunokwenzeka khona
Nabani na ongena kwesi sakhiwo kufuneka enxibe imaski.
Nabani na ongena kwesi sakhiwo (abathengi/iindwendwe) kufuneka basanithayize izandla zabo xa bengena naxa bephuma.
Umsebenzi obekwe emnyango unokutshiza ezandleni ngesanithayiza abantu abangenayo/abaphumayo kwesi sakhiwo endaweni yokokuba isanithayiza iphathwe ngabantu abaninzi.
Kunqande ukungena kwabantu abaninzi kwesi sakhiwo ukuba sele kukho abantu abaninzi ngaphakathi. Vumela umntu omnye (kuquka abasebenzi kunye nabathengi) kwisikwere seemitha ezi-6
6. Imigca okanye iindawo zokulinda zabathengi
Ukuncitshiswa kokum' emgceni ngokusebenzisa iinkqubo zokuqesha apho kunokwenzeka.
Apho kufuneka khona ukum' emgceni, qinisekisa ukuba abathengi bayakuthobela ukuchaselana ngokubeka iziphawuli emgangathweni ukohlula ngesithuba esiyi-1.5m. Kuphinde oku ngokubonisa imiqondiso efanelekileyo uze ubeke umsebenzi wokubek' iliso koku.
Ukuba iyasetyenziswa indawo yokulinda, bahlalise abantu kude omnye komnye kwaye ulinciphise inani elinokwamkelwa kwigumbi lokulinda. Ukuba igcwele indawo yokulinda, bakhuthaze abathengi ukuba benze idinga okanye baphinde babuye kamva endaweni yokum' emgceni ngaphandle kwendawo yokulinda.
Sula izihlalo kwindawo yokulinda ngesicoci esineepesenti ezingama-70% zealkhoholi emveni kokuba zisetyenzisiwe.
Thetha nabaphathi beevenkile zokuthenga naboobhazabhaza beevenkile zokuthenga kunye/okanye neevenkile zokuthenga ezisebumelwaneni, nje ukuba imigca iphumele ngaphandle kwevenkile, ukuqinisekisa isithuba esifanelekileyo phakathi kwemigca.
7. Izithuba phakathi kwezihlalo neendawo zokuhamba phakathi kwezithuba zokusebenzela
Kunqande ukuxinanana kwabasebenzi kunye okanye kwabathengi (umz. kwiivenkile okanye kwiindawo zogcinompahla) ngokubeka iziphawuli zomgangatho ngesithuba esiyi-1.5m kwizithuba phakathi kwezihlalo neendawo zokuhamba ezihlala zixakekile.
Yila isalathisindlela sokuhamba kwizithuba phakathi kwezihlalo neendawo zokuhamba (o.k.t. yenza zithuba phakathi kwezihlalo zibe "yindlela enye") ngokubeka iintolo emgangathweni, ukuba kunokwenzeka.
Kunqande ukubhityisa isithuba kwizithuba phakathi kwezihlalo ngokugcwalisa ngokutsha amashelufu ngexesha lokuthengisa okanye uvale izithuba phakathi kwezihlalo ngeli ugcwalisa ngokutsha ukuthintela ukubhityis' isithuba.
Musa ukuzibhlokha izithuba phakathi kwezihlalo ngeebhokisi okanye ngezixhobo.
8. Ukuhlamba rhoqo kunye nokucocwa kwamanyathelo
Qinisekisa ukuba zikhona izibonelelo ukwenzela bonke abasebenzi kunye nabathengi/iindwendwe ukuze bazihlambe rhoqo izandla zabo okanye basebenzise rhoqo isanithayiza yezandla yealkhoholi.
Khuthaza abasebenzi ukuba baziphathele ezabo izikhuphisanithayiza okanye ubanike ukunciphisa ukuphathwa kwale sanithayiza inye ngabantu abaninzoi.
Xa abasebenzi bekwimeko apho kufuneka babambe abantu kunye/okanye bathathe izinto kubo, ezifana nemali okanye iikhredithi khadi, kufuneka babanike isanithayiza yezandla yealkhoholi ukucoca izandla zabo ngaphambi kokubanceda. Tshiza izandla zabo ngesanithayiza. Musa ukubanika ikhonteyina yesanithayiza yezandla.
Kwakhona abasebenzi kufuneka bazihlambe izandla zabo emva emva kokubamba abantu kunye/okanye imigangatho kunye nezinto.
9. Sebenzisa iimaski zelaphu
Ngoku iimaski zelaphu zinyanzelekile ukuba zinxitywe nguye nabani na ophumayo oyakudibana nowonkewonke (kuquka neendawo zokusebenzela)
Kufuneka zinxitywe ngokuchanekileyo iimaksi zelaphu ukuze zisebenze kakuhle. jonga apha ngezantsi.
Umsebenzi ngamnye kufuneka anikwe iimaski zelaphu ezi-2. Oku kuvumela ukuba ubenayo enye ngeli lixa enye uyihlambile kwaye uyiayinile.
Nangona uyinxibile imaski, kufuneka uqinisekisa ukuba uyawalandela amanye amanyathelo ukunqanda ukunwena kwale ntsholongwane – gcina isithuba semitha eyi-1.5 kwabanye abantu kwaye uzihlambe rhoqo izandla zakho.
Kwakhona kufuneka uqinisekise uyayazi indlela echanekileyo yokuyinxiba, yokuyikhulula imaski yakho.
Qaphela ezi ngcebiso zilandelayo zokunxiba imaski yelaphu:
Hlamba izandla zakho phambi kokuyinxiba imaski
Nxiba imaski yakho ngecala elichanekileyo lijonge empumlweni nasemlonyeni wakho. Qinisekisa ukuba omabini la malungu agqumeke kakuhle.
Qhobosha imitya enkqentsu okanye ukuba inemitya ye-elastiki, qinisekisa ikuqinisile.
Nje ukuba uyinxibe imaski yakho yelaphu kwaye ukhululekile ngendlela ekulingana ngayo, MUSA UKUBUBAMBA UBUSO BAKHO OKANYE IMASKI de uyikhulule imaski
Yiyeke njalo imaski lonke ixesha, ngaphandle kwaxa ufuna ukutya okanye ukusela.
Yikhulule imaski ngokukhulula imitya okanye imitya ye-elastiki kwaye uyibambe ngemitya kuphela, yifake kwikhonteyina ilungele ukuhlanjwa.
Musa ukuyibamba imaski ubuqu xa uyikhulula
Musa ukugcina imaski emqaleni wakho xa ungayisebenzisi.
Hlambisisa izandla zakho emva kokuyikhulula imaski.
Yihlambe ngamanzi adikidiki kwaye uyiayine yonk' imihla imaski yakho yelaphu
Ukuba umsebenzi ufuna ukuyikhulula imaski yakhe ngexesha lomsebenzi (umz. ngexesha leti/lesidlo sasemini) aze afune ukuyinxiba kwakhona, kufuneka athathelwe ingqalelo ukubamba kuphela imitya yemaski. Imaski kufuneka igcinwe kwiphepha okanye ebhegini yeplastiki ecocekileyo (ebhalwe ngokucacileyo igama lomntu) xa ingasetyenziswa.
10. Ukusetyenziswa kwamakhakh' obuso okanye izikhuselibuso
Okwangoku akukho bungqina buxhasa ukusetyenziswa kwamakhakh' obuso kwindawo yokusebenzela njengoko zinkulu kwaye zisebenziseka nzima kwaye abasebenzi banokuthi baziphathaphathe kwaye oko kungazingcolisa izandla zabo.
Nangona kunjalo, baye babonelela ngeengcebiso kwaye, ke, ukuba abasebenzi banqwenela ukuzisebenzisa, kufuneka bavunyelwe ukuba benjenjalo, KODWA kufuneka bazisebenzise ngokufanelekileyo.
Nkqu naxa usebenzisa isikhuselibuso kufanele uyisebenzise nayo imaski, ukunqanda ukuvuza kweempumlo nomlomo.
Kufuneka kusetyenziswe kwa la manyathelo okhuseleko kwiimaski zelaphu:
Hlamba izandla zakho phambi kokuyinxiba isikhuselibuso
Nje ukuba usinxibe isikhuselibuso sakho kwaye ukhululekile ngendlela esikulingana ngayo, MUSA UKUBUBAMBA UBUSO BAKHO OKANYE ISIKHUSELIBUSO de usikhulule isikhuselibuso
Susa isikhuselibuso sakho phambi kokugobela phambili intloko.
Musa ukusibamba isiskhuselibuso ubuqu xa usikhulula
Musa ukusiphequkisela phezulu entlokweni yakho isikhuselibuso xa ungasisebenzisi.
Hlambisisa izandla zakho emva kokusikhulula isikhuselibuso.
Sicoce isikhuselibuso ngokusosula macala ngesanithayiza yealkhoholi
Ukuba umsebenzi ufuna ukusikhulula isikhuselibuso sakhe ngexesha lomsebenzi (umz. ngexesha leti/lesidlo sasemini) aze afune ukusinxiba kwakhona, kufuneka athathelwe ingqalelo ukusibamba kuphela ngelicala lithi nca entloko.
Kufuneka isikhuselibuso sigcinwe kwindawo ekhethiweyo (ebhalwe ngokucacileyo igama lomntu) xa singasetyenziswa kwaye kufuneka sosulwe ngesanithayiza yealkhoholi ngaphambi kokusetyenziswa kwakhona.
11. Usetyenziso lweeglavu
Iiglovu AZIKHUTHAZWA ukuba mazisetyenziswe rhoqo ngaphandle kwendawo yezempilo.
Ukuba iiglovu ziyafuneka njengeZixhobo zoKhuselo loMntu (iPPE) phantsi kweemeko eziqhelekileyo o.k.t. kuxhomekeke kuhlobo lomsebenzi owenziwe kwindawo yokusebenzela, kufuneka baqhubeke nokuzinxiba.
Bonke abanye abasebenzi abangafuni iigloves njengePPE phantsi kweemeko eziqhelekileyo kufuneka bahlambe izandla zabo rhoqo, okanye basebenzise isanithayiza yealkhoholi endaweni yazo.
12. Iindawo zokunik' iinkonzo kubathengi
Abasebenzi kufuneka bazizanithayize izandla zabo ngaphambi nasemva kokunceda umthengi ngamnye.
Kwakhona abathengi kufuneka bazisanithayize izandla zabo ngaphambi nasemva kokudibana nomsebenzi.
Kucetyiswa ukuba umsebenzi atshize isanithayiza ezandleni zomthengi endaweni yokumnika ibhotile yesanithayiza.
Isikhuselibuso sisenokusetyenziswa kwiindawo zokunik' iinkonzo kubathengi ukwenza umqobo phakathi komthengi nomsebenzi. Oku kufuneka kukhatshwe ngumqondiso onomyalelo wokuba akumelanga ubanjwe umphezulu wesikhuselibuso. Ukongeza, omabini amacala esikhuselibuso kufuneka acocwe rhoqo kusetyenzisw' isepha, amanzi kunye nesibulalintsholongwane.
Iikhawuntara, oomatshini bekhreditkhadi nazo naziphi na izinto abahlangabezana nazo abathengi kufuneka zicocwe emva komthengi ngamnye.
Apho kunokwenzeka khona, abathengi kufuneka bazihlawulele ngokwabo ngamakhadi wabo ngokwenza njalo banciphisa ukudibana kwekheshiya nomthengi.
Kwiindawo zentlawulo, kumele kukhuthazwe iinkqubo zokungadibani kwabantu.
Iintlawulo ze-elektronikhi akufuneki zifune ukusayinwa okuthe kratya kwamaphepha.
Ezithilini, thathel' ingqalelo ukuba nekheshiya enye ibe kwayiyo epakishayo. Eny' indlela, lungiselela iithili ngendlela yokokuba iikheshiya kunye nabapakishi bohlukane omnye komnye.
13. IiKhantini okanye amagumbi okuphumlela abasebenzi
Amaxesha eeshifti nawokuphumla afanele alungiselelwe ngendlela yokuba yokunciphisa inani labasebenzi "kwigumbi lekhefu" okanye ekhantini ngexesha.
Amanqaku kufuneka enziwe kwigumbi lokuphumla ukuqinisekisa ukuhamba komzimba okuncinci kwe-1,5 yeemitha kungagcinwa nokuba sekuhlwile iti.
Yahlula iitafile nezitulo ukuze kubekho isithuba esingangemitha e-1,5 phakathi kwazo.
Apho kunokwenzeka khona (kuxhomekeka kwindawo yokusebenzela nakwimozulu) bakhuthaze abasebenzi ukuba bawachithele phandle amaxesha wabo wekhefu ukuze baqhubeke ngokuchaselana.
Bonisa imiqondiso ekhuthaza abasebenzi ukuba bazihlambisise izandla zabo ngaphambi nasemva kokutya kunye nokugcina uchaselwano.
Qinisekisa ukuba sikhona isitya sokuhlambela nesepha kwigumbi lekhefu ukuze zisetyenziswe ngabasebenzi.
Yicocisise rhoqo yonke imigangatho.
14. Abasebenzi kunye neendawo zokufundela zabathengi
Khuthaza abasebenzi/abathengi ukuba bahlambe izandla zabo ngokuthi ubeke umqondiso obonakalayo ochaza oko.
Qinisekisa ukuba akhona amanzi kunye nesepha ukuze kuhlanjwe izandla. Kucetyiswa ukuba makusetyenziswe ingqiniba kwiimpompo ezinokusetyenziswa zingabanjwanga.
ukusebenzisa iitawuli zelaphu kwigumbi lokuhlambela. Kungcono usebenzise iitawuli zephepha ezinokulahlwa kwimigqomo ecikiweyo (evulwa ngonyawo).
Qinisekisa ukuba mikhulu ngokwaneleyo imigqomo kangangokuba angaginya iitawuli ezininzi zamaphepha kwaye/okanye uyicoce rhoqo imigqomo.
Faka iibhegi zeplastiki emgqomeni ufake kuzo inkunkuma ukuze kubelula ukuwucoca.
Abasebenzi abacoca imigqomo bamele banxibe iiglavu baze bahlambe izandla emva koko
Amagumbi angasese nawokuhlambela kufuneka acocwe rhoqo imini yonke – sebenzisa inkqubo yokurekhoda ukubonisa ukuba ukwenze kangaphi oku.
15. Impahla yokusebenza
Apho kwenzekayo khona, iimpahla zokusebenza kufuneka zishiywe kwindawo yokusebenzela zihlanjwe ngexesha elinye kusetyenziswa amanyathelo okhuseleko xa zihlanjwa.
Ukuba akunakwenzeka ukuba ushiye iimpahla zomsebenzi kwindawo yokuhlambela iimpahla, ke cebisa abasebenzi ukuba bayisuse impahla yabo yokusebenza kwindawo yokusebenzela baze bayifake ebhegini yeplastiki. Bafanele bazihlambe izandla zabo emva kokuzikhulula iimpahla zabo. Emva koko kufuneka bazihlambe iimpahla zabo zokusebenza ngamanzi ashushu ekhaya.
Ukuba akunakwenzeka ukuba bazitshintshe iimpahla zabo emsebenzini, abasebenzi ke kufuneka bazisuse ngoko nangoko iimpahla zabo zokusebenza baze bazifake kwibhasikiti yempahl' emdaka. Bafanele bazihlambe izandla zabo emva kokuzisusa iimpahla zabo.
Nceda uqaphele ukuba akumelanga zivuthululwe iimpahla kuba oku kungawisela phantsi intsholongwane.
Umphezulu wezihlangu mawosulwe ngesanithayiza yealkhoholi.
Awumelanga kuchukunyiswa umphantsi wezihlangu. Ukuba umphantsi wezihlangu udinga ukucocwa, nceda unxibe iiglavu uze uzihlambisise izandla emva kokuzikhulula uze uzilahle.
Abasebenzi baza kudinga iimpahla zokusebenza ezoneleyo/iiyunifom ukuvumela ukutshintsh' iimpahla zokusebenza yonk' imihla.
Yandisa upholisomoya lwendalo kwindawo yokusebenzela. Oku kunokwenziwa, umzekelo, ngokushiya ucango lwangasemva olunegeyithi yokhuseleko luvulekile, okanye ngokuvula iifestile.
Ukuba ziyasetyeniswa izihuhuzimoya kufuneka kubekho ubuncinci bokutshintsha umoya amaxesha ali-12 ngeyure nganye kwaye ke ngoko akumelanga kuphinde kubekhoaku kujikela kwamoya kwakhona.
17. Iindlela zokucoca zemihla ngemihla kunye nolawulo lwenkunkuma
Ukudibana kunye nokuyibamba rhoqo imigangatho kwaye izinto kufuneka zicocwe kwaye zifakwe isibulalintsholongwane yonke imihla.
Sebenzisa isepha kunye namanzi ukucoca iindawo apho kunokwenzeka.Use soap and water to clean areas where possible. Emva koko usibulale isibulala-ntsholongwane ngesisombululo esichazayo sokudakumba.Then disinfect with a dilute bleach solution. Xuba ibhlitshi eyi-30ml kwilitha nganye yamanzi.
Ukuba le ndawo ayinakucocwa ngesepha nangamanzi, sula indawo ngononophelo ngesisombululo se-70% sealkhoholi.If the area cannot be cleaned with soap and water, then wipe down the area carefully with a 70% alcohol solution.
Izibulalintsholongwane ezinokusetyenziswa ziquka:
IBlitshi o.k.t. iSodium hypochlorite (0.1%)
Ialkhoholi o.k.t. iEthanol (70%)
Iikhompawundi zeQuaternary ammonium
IHydrogen peroxide (3%)
IPeroxyacetic acid (0.5%)
IPhenolic o.k.t. isepha yecarbolic
Ii-Iodophors o.k.t. iodines (1%)
Nasiphi na isixhobo ekwabelwan ngaso ngabasebenzi sifanele sicocwa qho phambi kokusetyenziswa.
Inkunkuma evela kwiikhonteyina ifanele igalelwe kwiibhegi zeplastiki ize ziqhinwe phambi kokuba ilahlwe kwindawo yokulahl' inkunkuma ukuze izokuqokelelwa ngabaqokelel' inkunkuma.
Abasebenzi abaphatha inkunkuma kufuneka banxibe iiglavu zokuncedisa xa beqoqngqotha iikhonteyina zenkunkuma.
Abaphathi benkunkuma nabacoci kufuneka banxibe izihlangu ezivalekileyo.
Coca indawo yokugcina inkunkuma yonke imihla.
18. Ukwamkela iimpahla kubathengisi
Abaqhubi mabahlale kwizithuthi zabo kangangoko banako.
Abaqhubi kunye nabancedisi kufuneka banxibe imaski yelaphu.
Uchaselwano lumele lugcinwe kusamkelwa iimpahla.
Abaqhubi kunye nabancedisi kufuneka basebenzise isanithayiza phambi kokuhambisa nokwamkela amaxwebhu okanye iiphakeji eziya kubasebenzi.
Qinisekisa ukuhlanjwa kwezandla/ukusetyenziswa kwesanithayiza rhoqo.
Ukulawula abasebenzi abosulelekileyo okanye abasenokosuleleka yintsholongwane yekhorona
Ukuba umsebenzi kwindawo yakho yokusebenzela uye wosuleleka yintsholongwane yekhorona kubalulekile ke ngoko ukumnceda loo msebenzi, ngokunjalo nabanye abasebenzi, uze uhlole ngokutsha into enokwenziwa ukunqanda ukuqhubeka kokunwena kwentsholongwane yekhorona, nokuba kusemsebenzini okanye kumakhaya wethu sonke thina sinabantu abanxulumeneyo nomsebenzi lowo.
Ukwenza oku ngempumelelo, kufuneka kujongwe umba ngamnye kule ilandelayo:
Nika inkxaso kulo msebenzi uze umncedise ngokumnxwema,
Nika inkxaso kwabanye abasebenzi kwaye ubalungiselele ululekongqondo
Yazisa iSebe lezeMpilo ukuba unomsebenzi onolosuleleko lwentsholongwane yekhorona 2019 (iCOVID-19)
Zama ukufumanisa ukuba wosuleleke njani loo msebenzi,
Jonga ukuba ngowuphi omnye umsebenzi onokuthi osuleleke,
Ncedisa ekunxibelelaneni nabo bonke aba bantu uze ubancedise ngokubagcin' ekhusini
Qhubeka ngokubahluza abasebenzi ukufumanisa iimpawu zolosuleleko olunokubakho lwentsholongwane yekhororna
Thatha amanyathelo ukuthintela naluphi na usulelo olungaphaya
Kunokwenzeka ukuvalwe kwendawo yokusebenzela okwethutyana
Ukuvulwa ngokutsha kwendawo yokusebenzela
Ukucocwa kweendawo ezosulelekileyo
Umba ngamnye kule ili-11 uxoxiwe apha ngezantsi.
Inkxaso kumsebenzi owosuleleke yicovid-19
Umsebenzi wakho usenokubekwa ekhusini ukusukela ekufunyanisweni kwakhe enentsholongwane yekhorona kwaye unokwaziswa ngugqirha okanye ngumongikazi ukuba wosulelekile kwaye kufuneka anxwenywe iintsuku ezili-14. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kukho unxibelelwano olungalunganga malunga noku kwaye umsebenzi wakho usenokuqhubeka ngokuya emsebenzini.
Ukuba umsebenzi usemsebenzini:
Mohlule kwabanye abasebenzi ngoko nangoko umbeke kwigumbi elingenomoya ngokwaneleyo
Mcele ukuba azihlambe rhoqo izandla zakhe
Mnike imaski yotyando ukuba unayo. Ukuba awunayo qhubeka ngokunika imaski yelaphu
Qinisekisa ukuba umsebenzi wakho ufuman' ululekongqondo kwaye ukwisimo sengqondo esifanelekileyo ukulandela eminye imiyalelo.
Ncedisa umsebenzi ukuba alandele ingcebiso evela kwisebe lezempilo malunga nokuzinxwema.
Ncedisa ekufumanisa ingaba uyakwazi na umsebenzi ukuzinxwema ngokwakhe okanye ukuba kufuneka umse kwiziko lokunxwema loluntu ukuba oko kuyimfuneko. Ukuba liyafuneka iziko loluntu qinisekisa ukuba uyakukhankanya oku kwiSebe lezeMpilo.
Fumanisa ukuba ingaba uyakwazi ukuzihambela kusini na umsebenzi azgodukele okanye aziyele kwiziko loluntu lokuzinxwema ngaphandle kokubeka abanye abantu emngciphekweni wolosuleleko; o.k.t. ingaba uzakusebenzisa isithuhti sikawonkewonke. Ukuba akunjalo, ncedisa umsebenzi ukuba agoduswe ngokukhuselekileyo.
Ukuba umsebenzi usekhaya okanye ukwiziko lokunxwema:
Mncedisa ke umsebenzi ukuba alandele ingcebiso evela kwisebe lezempilo ngokubhekisele kunxwemo olufunekayo ukukhusela usapho lwakhe, abahlobo, abantu asebenza nabo
Ncedisa ekufumanisa ingaba uyakwazi na umsebenzi ukuzinxwema ngokwakhe ekhaya okanye ukuba kufuneka umse kwiziko lokunxwema loluntu ukuba oko kuyimfuneko. Ukuba liyafuneka iziko loluntu qinisekisa ukuba uyakukhankanya oku kwiSebe lezeMpilo.
Mnike amalungiselelo ekhefu elifanelekileyo lokugula eliziintsuku ezili-14 zokuba umsebenzi akazukuphangela. Qaphela ukuba iintsuku ezili-14 lelona xesha lincinci lokuzinxwema kwaye lisenokuba lide kuxhomekeka ekubeni ugula kangakanani na umsebenzi nakunyango olufunekayo.
Mnike ululekongqondo lwenkxaso ngokusebenzisa inkqubo yokunceda abasebenzi kwindawo yokusebenzela (iEAP) okanye ngenkqubo yempilontle yabasebenzi okanye ngokusebenza umsebenzi othembekileyo
Ukuba kufumaniseka ukuba ingathi lwenzeke emsebenzini olosuleleko (ngamanye amagama lufumaneka ngaphandle okanye ngexesha lokwenza umsebenzi), kumele ke ngongo kufakwe ibango lembuyekezo yomsebenzi.
Inkxaso kwabanye abasebenzi
Baqinisekise abasebenzi ukuba le meko uyisingathe ngokulandela iingcebiso zeSebe lezeMpilo (jonga ngezantsi) nento yokokuba uyamxhasa umsebenzi owosulelekileyo.
Yazisa abasebenzi ukuba iSebe lezeMpilo kunye namanye amasebe kaRhulumente, encediswa licandelo lakho lezempilo kunye nempilontle okanye lenkonzo yempilo yabasebenzi, (ukuba unayo nayiphi na kwezi), baza kuhluzwa abasebenzi ukufumanisa ukuba sesichengeni kwintsholongwane okunokwenzeka kwaye bacetyeswe ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka bawathathe.
Qhagamshelana nenkqubo yokunceda abasebenzi kwindawo yokusebenzela (EAP)/icandelo lempilo kunye nempilontle (okanye inkonzo yezempilo emsebenzini) kwaye ubalumkise ukuba bancedise ngokukhawuleza kwaye bandise inkqubo yohluzo, inkxaso yolulekongqondo kunye nesimo sengqondo esele bayifumana abasebenzi kwivenkile echaphazelekayo. Okanye, usenokuchonga umsebenzi othembakeleyo ukuba anikezele ngenkxaso nangolulekongqondo kubasebenzi.
Bek' iliso kwimpilo yengqondo nakumazinga oxinzelelo lwabo bonke abasebenzi, yiba nobubele kwaye ucinge malunga noxinzelelo olunokubakho kubasebenzi abosulelekileyo abasebenza nalo msebenzi kuba kunokwenzeka ukuba babe sesichengeni.
Yiba nesicwangciso sokuqinisekisa ukuba abasebenzi bafumana iingcombolo ezichanekileyo.
Yazisa isebe lezempilo kunye nesebe lezabasebenzi nengqesho
Isebe lezempilo liyabazi bonke abantu abafunyaniswe bentsholongwane yekhorona iCOVID-19 ngokusebenzisa iindlela zokunik' ingxelo zaselebhu. Nangona kunjalo, ngenxa yokulibaziseka kunikongxelo, umsebenzi unokuzazi iziphumo zoxilongo ngaphambi kwesebe lezempilo
Kufuneka umqeshi aqhagamshelane neziko loncedo lweCOVID-19 kule nombolo 021 928 4102.
Emva kokuqhagamshelana neziko loncedo, iqela lesebe lezempilo elifanelekileyo okanye neqela lesebe likarhulumente elisebenzisan nalo, liza kuqhagamshelwa ukuze likuncedise.
Nalo iSebe laBasebenzi neNgqesho lifanele liqhagamshelwe
Fumanisa ukuba wosuleleke njani loo msebenzi
Kusenokwenzeka ukuba lo msebenzi wosulelwe ngabanye asebenza nabo/abaphathi, abathengi, okanye ngomntu ngaphakathi ekhaya okanye kwindawo ahla kuyo. Ngoko ke ngoko, kubalulekile:
Umcedise umsebenzi achaze ukuba ingaba akhange adibane nomntu oneempawu zolosuleleko lomqala nesifuba. Ezi mpawu zezi:
Ngokufanayo, kubalulekile kubaphathi ukuba babachonge ngqo abasebenzi abasoloko beneendwendwe emsebenzini, bafumanise ukuba ngabaphi kubo abanazo ezi mpawu zidweliswe apha ngezantsi. Phakathi kwaba bantu kunokuba ngumntu okanye abantu abosulele umsebenzi kuqala kwaye basenokuqhubeka ngokunwenisela intsholongwane kwabanye abasebenzi, iindwendwe kunye nabathengi bengazi bona.
Bandakanya inkxaso yabasebenzi bezempilo emsebenzini apho kunokwenzeka khona kubekho nendlela yokubazi abantu adibene nabo. Yenza uluhlu lwabo bonke aba basebenzi kunye nabanye abantu abaneempawu njengoko kungafuneka ukuba bahlolwe, ukugqiba ukuba ngaba kuya kufuneka bahlolelwe intsholongwane yekhorona. Bandakanya igama, ifani, inombolo yoqhagamshelwano kunye nedilesi yaba bantu apho kunokwenzeka khona.
Kuxhomekeka ekubeni bangaphi abasebenzi ababandakanyekayo, kusenongafuneka ivalwe okwethutyana indawo yokusebenzela ngelixa kusaqhutywa uphando.
Yolatha umsebenzi athe wadibana naye lo msebenzi
Nabaphi na abantu athe wadibana nabo umsebenzi ukusukela ukuqala kwakhe ukugula waze wadinga ukunxwenywa kwabanye abasebenzi nabathengi (ukuba bakhona), ngokubekwa yedwa.
Buza umsebenzi ukuba ngubani na ebekhe wadiba naye (o.k.t. ukudibana ubuso ngobuso kangangemitha e-1, ebobelene nabo edibene nabantu abosulelekileyo kwiiyure ezingama-48 phambi kokubonakala kweempawu) okanye ebesebenze kunye nabo. Oku kusenokuba koku:
Abatyeleli kwindawo yokusebenzela
Abantu kwiindwo ebahlala kuzo
Abantu abahamba nabo
Abantu abakwiindibano zoluntu
Ngokufanayo, buza bonke abasebenzi abasemsebenzini ukuba ingaba abakhumbuli besondelene okanye besebenzela kufuphi omnye komnye ukusukela ngomhla wayeqala ukugula.
Bandakanya inkxaso yabasebenzi bezempilo emsebenzini kwiNkampani okanye umntu okwicandelo lezibonelelo zabasebenzi ukuba ancedise ekuqhamsheleni nakulandeleni umkhondo nolawulo lwabaqhagamshelwa. Yenza uluhlu lwabo bonke aba basebenzi kunye nabanye abaqhagamshelwafowunelwa njengoko banokuthi banxwenywe ukunqanda ukunwena ngakumbi kwale ntsholongwane. Bandakanya igama, ifani, inombolo yoqhagamshelwano kunye nedilesi yaba bantu apho kunokwenzeka khona.
Kuxhomekeka ekubeni bangaphi abasebenzi ababandakanyekayo kusengafuneka ukuba mayivalwe okwethutyana indawo yokusebenzela ngeli lixa kusaqhutywa uphando.
Ncedisa ngoklandel' umkhondo nagokunxwema abantu abasenokuba bosulelekile
Isebe lezempilo lincediswa ngamasebe karhulumente asebenzisana nalo liza kuqhuba udliwanondlebe ukufumaneka ukuba ingaba ubesesichengeni kangakanani ukuze abe unokuba wosulelekile, nto leyo enokuthi ichaze ukuba ingaba kufuneka babekwe bodwa okanye hayi. Nceda uqhagamshelane neSebe lezeMpilo ngoko nangoko.
Nangona kunjalo, ukuba inkampani inenkonzo yempilontle yabasebenzi okanye inkonzo yezempilo emsebenzini iya kulindeleka ukuba bancedise kule nkqubo phantsi kwesikhokelo sesebe lezempilo.
Nceda unikezele ngoluhlu lwabafowunelwa kwisebe lezempilo. (Musa ukulibazisa ukuqhagamshelana nesebe lezempilo ngelixa ulungiselela olu luhlu).
Nceda ulivumele isebe lezempilo ukuba libafumane abasebenzi ngokusebenzisa igumbi elithuleyo okanye ngomnxeba.
Kwabo basebenzi abafuna ukugcinwa bodwa, nceda ubonelele ngamalungiselelo ekhefu afanelekileyo ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-14 abaza kuhlala bodwa.
Ukunxwema kuthetha ukuba abantu abasemngciphekweni omkhulu wokosulelwa yintsholongwane yekhorona bayohlulwa kwabanye abantu kangangeentsuku ezili-14 ukusukela kumhla bebesichengeni sabantu abasebenza nabo, ukuze bangakwazi ukosulela abanye abantu.
Kuxhomekeka kwimeko yabo yekhaya banokunxwenywa bodwa ekhaya okanye kwindawo elungiselelwe ukunxwenywa.
Ukuze bavunyelwe ukuba bazinxweme endlwini kufuneka babe negumbi abanokuba bodwa kulo, bohlulwe kubo bonke abantu abasendlwini.
Kuxhomekeka ekubeni bangaphi na abasebenzi ababandakanyekayo kusengafuneka ukuba ivalwe okwethutyana indawo yokusebenzela ngeli lixa besanxwenyiwe.
Qhubeka ngokubahluza abasebenzi ukufumanisa iimpawu ezinokuba khona zolosuleleko lwentshongwane yekhorona
Kungenzeka ukuba abanye abantu ababedibene nomsebenzi abakhange babonwe ngexesha le nkqubo echazwe apha ngasentla nto leyo enokubenza babe basasebenza kwaye ke ngolo hlobo babe sengciphekweni wokosuleleka. Kwakhona, abanye abantu basenokosuleleka ngentsholongwane yekhorona kodwa babe bephile qete, kodwa baze bagule kamva. Kungenzeka ukuba abantu abanje babe basasebenza kwaye basenokuba ngabona baze nayo le ntsholongwane yekhorona emsebenzini.
Ngoko ke, bonke abasebenzi bafuneka babekwe esweni yinkampani mihla le (jonga icandelo A ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe ekuhluzweni kwabasebenzi imihla le) ukubona abanye abasebenzi abasenokuba neempawu.
Ukuba umsebenzi uba neempawu akufuneki eze emsebenzini, kodwa endaweni yoko kufuneka axelele umphathi wakhe kunye nesebe lezempilo (tsalela icandelo loncedo leCOVID-19 kule nombolo 021 928 4102), lona elizakubacebisa ukuba leliphi iziko lovavanyo amabaye kulo, ukuze bavavanyelwe intsholongwane yekhorona.
Nangona kunjalo, abanye abasebenzi banokuthi beze emsebenzini nokuba ngaba banempawu kwaye ngenxa yoko abaphathi kufuneka babuze bonke abasebenzi ngazo naziphi na iimpawu abanokuba nazo, yonke imihla phambi kokuba baqale umsebenzi. Ukuba umsebenzi akaziva kamnandi ngexesha lomsebenzi, kufuneka aphinde ahluzelwe iimpawu zize zilawulwe ngokwendlela eziyiyo.
Amanqanaba asibhozo okuthintela ulosuleleko lwexesha elizayo kubasebenzi
Zonke iindawo apho umsebenzi ebesebenza khona okanye ebezityelele kwindawo yokusebenzela kufuneka icocisiswe ngamanzi anesepha ize yosulwe ngomxube webhlitshi (xuba umxube webhlitshi oyi-30ml kwilitha yamanzi nganye ukunika umxube oyi-0,1%). Ukuba le ndawo ayinakucocwa ngamanzi anesepha kufuneka ke yosulwe ngobunono ngomxube webhlitshi, okanye nge-70% yomxube wealkhoholi.
Indawo eza kucocwa kufuneka ihambelane ngqo nemeko nganye kwaye ibandakanya ikhitshi, igumbi lezicwangciso labasebenzi, icanteen, izindlu zangasese, iitroli, ibhaskiti, izibambi macango, iindawo zokusebenzela, iikhompyutha kunye neekhawuntara, phakathi kwezinye.
Ukuba imigangatho yeendawo ezinkulu kunye nezinto ezinkulu eziliqela zidinga ukucocwa zize zibulawe iintsholongwane, kungadingeka ukuba indawo yokusebenzela mayivalwe okwethutyana ngeli xesha kusenziwa oku.
Landela ngokungqongqo ezi zikhokelo zokuthintela ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona zidweliswe apha ngasentla.
Kungafuneka ukuba iSebe lezeMpilo licebise ukuba mayivalwe okwethutyana indawo yokusebenzela ngenxa yokuba ingabeka impilo yoluntu emngciphekweni ukuba ivuliwe.
Oku kuzakwenziwa ngokubonisana nabaphathi benkampani kwaye kuza kuxhomekeka kwinani lezinto ezibandakanye ezi zilandelayo:
Indawo yokusebenza okanye icandelo lendawo yokusebenza linokufuna ukuvalwa okwethutyana kuxhomekeka kwezi zinto zilandelayo:
Ukuba lukhulu kakhulu inani labasebenzi abaneempawu, ngenxa yexesha elifunekayo lokuphanda nokufumanisa ukuba ngaba kufuneka bavavanyelwe ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona okanye hayi.
Ukuba likhulu inani labasebenzi abangabaqhagamshelwa bomsebenzi onentsholongwane yekhorona, ngenxa yexesha elifunekayo lokuphanda nokufumanisa ukuba ngaba kufuneka bavavanyelwe ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona okanye hayi.
Ukuba inkulu indawo ekwindawo yokusebenzela kwaye nezinto ezilapho zidinga ukucocwa, ngenxa yexesha elifunekayo ukukuwugqiba lo msebenzi ubalulekileyo.
Ukuba likhulu inani labasebenzi abafunyaniswe benolosuleleko lwentsholongwane yekhorona baze babe badinga indawo enkulu yokuba nxwema, nanjengokokuba basenokungoneli abasebenzi ekufuneka besebenzile emsebenzini.
Ukuba likhulu inani labasebenzi abanconywayo lifunyaniswe lingumqhagamshelwa bomsebenzi owosulelekileyo kwaye ke kufuneka linxwenywe, nanjengokokuba basenokungoneli abasebenzi ekufuneka besebenzile emsebenzini.
Inkcazo ka 'enkulu' iya kuba yeyesimo soshishino kunye nesithuba kwaye sixoxwe ngokudibana neqela leSebe lezeMpilo.
Qaphela ukuba inkampani iyala ukuyivala indawo yokusebenzela emva kokucetyiswa ukuba mayenze njalo, abahloli abasuka kwiSebe lezaBasebenzi neNgqesho banegunya lokuwavala amasango aloo ndawo.
Kungathintelwa ukuvalwa okwethutyana kwendawo yokusebenzela:
Ukucocwa nokubulawa kweentsholongwane rhoqo kwemigangatho yeendawo nezinto ezosulelekileyo.
Ukugqitywa kokukuhluzwa rhoqo kwabanye abasebenzi abangosulelekanga.
Xa kugqitywa ubulawontsholongwane, kuxhaswe ukuziswa kwabasebenzi bamanye amasebe bathathe indawo yabo banxwenyiweyo baze babekwa ekhusini, kuphephe ukuzisa abasebenzi abasebenza kumasebe ngamasebe ngexeshana elifutshane, o.k.t. abasebenzi abaxhasiweyo baza kufuneka basebenze kwisebe elinye ngexesha kangangesiqingatha sonyaka.
Ukuqesha okwethutyana abasebenzi abanobuchule bokungena endaweni banxwenyiweyo nababekwe ekhusini.
Ukuthintela ulosuleleko lwabasebenzi abanentsholongwane yekhorona ngokulandela amanyathelo obulumko achazwe kwicandelo lokuqala lolu xwebhu.
Ukuqeqesha abasebenzi ngendlela yokuthintela ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona.
Ukuze iphinde ivulwe indawo yokusebenzela, ezi zinto zifunekayo zilandelayo kufuneka zibekhona:
Uvavanyo lweemeko ezikhokelele ekubeni umsebenzi abe sesichengeni somsebenzi onentsholongwane yekhorona.
Inkcazo yamanyathelo aza kuthathwa ukulungisa naluphi na usilelo kwimisebenzi engabonwanga yokuthintela ngexesha lohlolo.
Luphunyelelwe uqeqesho olupheleleyo (kunye noqeqesho lokuvuselela) lwabasebenzi kwimisebenzi yokuthintela intsholongwane yekhorona.
Kwenziwe ukucocwa nokubulawa kweentsholongwane kwemigangatho ngokunjalo nezinto ezosulelekileyo.
Kumele kubhalwe phantsi kwingxelo uhlolo kunye nenkcazo yawo nawaphi na amanyathelo athatyathiweyo kwaye oko kugcinwe kwirekhodi, zize zenziwe zifumaneke kwiSebe lezeMpilo kunye neSebe lezeNgqesho neMisebenzi.
Sele zikho iinkqubo zokuzalisekisa yonke le misebenzi yothintelo idweliswe apha ngasentla.
Ukuba ibivaliwe indawo yokusebenzela ngokwemiyalelo evela kumhloli weSebe lezeNgqesho neMisebenzi, kuya kufuneka kuboniswe uthotyelo ngokusesikweni ngaphambi kokuba kuvunyelwe ukuba kuvulwe kwakhona.
Coca yonke imigangatho/izinto anokuthi azibambe/adibane nazo umntu owosulelwe yintsholongwane.
Kufuneka inxitywe iPPE ngexesha lokucoca kwaye abacoci kufuneka bazihlambisise izandla zabo ngaphambi nasemva kokuba bacoce.
Ezi zixhobo zokusebenza (iPPE) zimele zinxitywe ngexesha lokucoca:
IiGlavu zerabha ezomeleleyo
Isikhuselibuso okanye iigogulzi
Ezi zixhobo zilandelayo kufuneka zisetyenziselwe ukucoca kunye nokubulal' iintsholongwane:
Kufanele kusetyenziswe isepha elihlaza ukucoca zonke izixhobo nemigangatho yendawo enokumelana nayo (umz. iindonga, imigangatho, iibhlayindi, imiphezulu yemigangatho) phambi kokubulal' iintsholongwane.
Isibulalintsholongwane (iitispuni ezi-6 o.k.t. 30ml yebhlitshi kwilitha nganye yamanzi) kufuneka sisetyenziswe emva kokucoca ukubulala intsholongwane kuzo zonke iizixhobo nemiphezulu yemigangatho.
Ukuba indawo/umphezulu womgangatho akanakucocwa ngesepha namanzi, yosula ngomxube wealkhoholi oyi-70%.
Izikhokelo ezingqalileyo zamacandelo ahlukeneyo
Eli candelo loxwebhu libonelela ngesikhokelo esongezelelekileyo kumacandelo athile ngokubhekisele kuthintelo lolosuleleko lwentsholongwane yekhorona. Sizama ukuqwalasela izinto ezithile ekumele zijongwe ngaphakathi kwicandelo. Kuza kubakho ukushiyana kwengcebiso kwicandelo ngokubanzi lezikhokelo zothintelo kodwa oko kwenziwa ngenjongo ethile kwaye kungenxa yokuba lo mba uphawulwe njengobalulekileyo kwicandelo.
Amacandelo achatshazelweyo apha:
IiOfisi zeeNdawo zokuSebenzela ezingenaFikelewayo luLuntu
IiBanki, iiOfisi zePosi kunye neeOfisi zikaRhulumente ezinceda uLuntu
Izithuhti i-eHailing (Uber, Bolt, njl.njl) kunye neeeTeksi zaBucala
IGaraji zokugalela ipetroli
IiVenkile eziNkulu zeMpahla
Izikroxo neevenkilana ezincinci
Iinkonzo ekubanjwana kuzo ixesha elide (iindawo zokwenz' iinwele, ispa, indawo yamazipho, indawo yokolul' umzimba, njl.njl.)
Amaziko onakekelo kunye namakhaya wabantu abadala
Sebenzela ekhaya apho kunokwenzeka khona.
Nxiba imaski yelaphu xa uphakathi kwabantu. Musa ukuyibamba imaski. Yikhulule imaski ngokuyibamba ngemitya yayo. Hlambisisa izandla zakho emva kokuyikhulula imaski.
Zishiye zivulekile iingcango zesakhiwo ukuba azilawulwa ngesensa yombane.
Hambisa iingcango ezijikelezayo (ii-turnstiles) ngomzimba hayi ngezandla zakho.
Ngokwesiqhelo abasebenzi kufuneke bachukumise iibiometric sensor pads, baphakamise amaqhosha kunye nezibambicango ukuze bangene kwiiofisi zabo kwaye kungoko kubaluleke kakhulu ukuhlamba izandla zakho ngaphambi kokuqalisa umsebenzi kunye nokubamba imigangatho nezixhobo.
Yahlula iidesika nemigangatho yokusebenzela.
Musa ukwabelana ngezixhobo, ukuba kuyenzeka okanye wosule ngomxube webhlitshi.
Amaxesha alungiselelweyo ekhefu leti.
Xa ninentlanganiso chaselanani kakhulu.
Bambani iintlanganiso zeenkomva ngevidiyo.
Sanithayiza izandla zakho ngesanithayiza enealkhohol emva kokusishiya isakhiwo.
Zitshintshe uze uzihlambe iimpahla zakho xa ufika ekhaya.
Iibhanki, iiofisi zeposi kunye neenkonzo zikarhulumente ezinceda uluntu
Ukuba kuyenzeka bavumele abathengi bafike ngokwamaxesha amiselwe amadinga wabo.
Abasebenzi kunye nabathengi kufuneka banxibe iimaski zelaphu.
Tshiza isanithayiza yealkhoholi ezandleni zabathengi xa befika naxa bephuma.
Yiba nomsebenzi ome ngakwisixhobo esikhupha amatiki aneenombolo ukhuphele abathengi. Abathengi ke bayakuvela nje bathathe itikiti elicocekileyo okanye bathunyelelwe inombolo kwiselfowuni zabo.
Misela isithuba kwimigca ngokwemitha eyi-1,5 phakathi komny' umntu ngokusebenzisa iteyipu emgangathweni.
Abathengi kufuneka bahlalelane kude omnye komnye (>1,5 iimitha) kwindawo yokulinda.
Beka iglasi ebonisa ngokucacileyo phakathi kwabathengi nabasebenzi.
Tshiza isanithayiza yealkhoholi ezandleni zabathengi phambi nasemv kokusebenzisa ibiometric sensor pads.
Abathengi kufuneka baziphathele iipeni zabo.
Bonelela ngeezosuli zealkhoholi ukucoca iipeni ezisetyenziswa ngabantu phambi nasemva kokusetyenziswa kwazo.
Sebenzisa iinkqubo zokuhlawula ekungaditywanayo ngazo apho kunokwenzeka khona.
Abathengi kunye nabasebenzi bafanele basebenzise ialkhoholi nesanithayiza phambi nasemva kokunaniselana ngemali kunye nokusebenzisa amakhadi.
Yosula zonke izixhobo ebeziphethwe ngabathengi ngeezosuli zealkhoholi.
Coca irenki yeebhasi kunye neerenki ngesepha namanzi okanye ngezixhobo zakho zesiqhelo zokucoca ngexesha lokuvala, emini emaqanda narhoqo ngorhatya emva kokugqitywa kwemisebenzi.
Sula imiphezulu yemigangatho yerenki yeebhasi neeteksi ngomxube webhlitshi (30ml yebhlitshi ngelitha nganye yamanzi) ngeyure nganye, ngelixa isasetyenziswa irenki.
Abakhweli, abaqhubi, oonogada kunye nabalindi berenki kufuneka banxibe iimaski.
Bohlule abakhweli ngemigca kwirenki yebhasi neyeteksi ngomgama oyimitha eyi-1,5. Yenza umgca osisiphawuli semitha eyi-1,5 emgangathweni uze ubaxelele abakhweli ukuba mabame omnye emva komnye ngokwemigca ephawuliweyo.
Musa ukuba vumela abathengi bazivulele ngokwabo iingcango zeteksi. Wayeke ahlale evulekile amacango ngelixa ulinde abakhweli. Bavulele amacango abakhweli xa ubachola endleleni oyihambayo.
Banike abakhweli isanithayiza yealkhoholi ukuze bacoce izandla zabo phambi kokungena eteksini naxa besondela kufutshane nomqhubi webhasi. Tshiza izandla zabo ngesanithayiza. Musa ukubanika abakhweli ikhonteyina yesanithayiza yezandla.
Hlikihla izandla zakho imizuzwana engama-20 ngesanithayiza yealkhoholi emva kokuthatha imali kumthengi ngamnye.
Musa ukuyigcwalisa mfi ngabantu ibhasi okanye iteksi. Yigcine inesiqingatha senani labantu.
Bavumele abakhweli bahlalelane qelele omnye komnye ukuba kuyenzeka.
Gcina iifestile zivulekile ukuvumela ukuba aphumele phandle amathontsi xa kunokwenzeka akhohlele okanye athimle umkhweli.
Yosula izibambicango, izibambifestile kunye nezihlalo ngesanithayiza emva kohambo ngalunye.
Coca ngesepha namanzi uze ubulale intsholongwane umphandle wesithuthi kabini ngosuku ngebhlitshi kunye nomxube wamanzi. Xuba ibhlitshi eyi-30ml kwilitha nganye yamanzi. Yicoce qho emva kokuphela komsebenzi wosuku (umz. emva komsebenzi wakusasa kwakhona emva komsebenzi wangorhatya).
Wosule kabini ngosuku wonke umphakathi wesithuthi ngesanithayiza yealkhoholi.
Ehailing transport (Uber, Bolt, njl.njl) kunye neeteksi zabucala
Abaqhubi kunye nabakhweli kufuneka banxibe imaski yelapho.
Hambisa umntu omnye ngexesha. Kwizithuhti ezinkuu ungakhwelisa abantu aba-3 ubuninzi.
Xa uhambisa abantu abangaphezulu komnye, bavumele e abakhweli bahlale ngokuqelelana kude omnye komnye kangangoko kunokwenzeka.
Musa ukuba vumela abathengi bazivulele ngokwabo iingcango zesithuthi. Bavulele yona ngokwakho.
Njengomkhweli kumele ungalivuli icango kwaye kumele uzame ukungayibambi imiphezulu yemigangatho ngaphakathi kwisithuhti.
Thiza isanithayiza yezandla ezandleni zabakhweli phambi kokuba bakhwele isithuthi.
Hlikihla izandla zakho ngesanithayiza yealkhoholi emva kokuthatha imali kumthengi ngamnye.
Ukuba usebenzisa umatshini wekhredit khadi, wosule kuqala umatshini wekhredit khadi ngesanithayiza yezandla uze uzihlikihle izandla zakho ngesanithayiza yealkhoholi.
Tshiza isanithayiza yezandla eandleni zabakhweli emva kokuninaiselana ngemali okanue kokusebenzisa ikhredit khadi.
Zigcine zivulekile iifestile.
Coca ngesepha namanzi uze ubulal' iintsholongwane kumphandle wesithuthi kabini ngosuku ngebhlitshi nagomxube wamanzi. Xuba ibhlitshi eyi-30ml kwilitha nganye yamanzi. Yicoce qho emva kokuphela komsebenzi wosuku (umz. emva komsebenzi wakusasa kwakhona emva komsebenzi wangorhatya).
Abasebenzi kunye nabathengi kufuneka banxibe iimaksi zelaphu.
Abagalelipetroli abafanelanga ukuba batshintshatshintshe iimpompo ngexesha lomsebenzi ukuba kuyenzeka.
Bakuthaze abathengi ukuba bahlale kwizithuthi zabo ngaphandle kokuba kufuneka baye kuthenga kwivenkile yegaraji yepetroli
Gcina umgama wesithuba semitha esiyi-1,5 ukusuka kwifestile yesithuthi.
Musa ukubamb' icango, ifestile okanye isibambicango
Banike isanithayiza yealkhoholi abathengi ukuze bacoce izandla zabo phambi kokuba bakunike imali okanye ikhadi.
Tshiza izandla zabo ngesanithayiza. Musa ukubanika abathengi ikhonteyina yesanithayiza yezandla.
Kwakhona, banike isanithayiza yealkhoholi yezandla abathengi ugqibe ukubanceda.
Phambi kokwenza intlawulo ngekhadi okanye ngemali ezinkozo lowo uncedayo kufuneka azisanithayize izandla zakhe
Yosula umatshini wekhredit khadi ngesanithayiza yezandla ngaphambi nasemva kokuncedisa umthengi ngamnye.
Musa ukuzibamba izandla zomthengi xa umnika umatshini wekhredit khadi.
Umthengi ufunele azifakele/aziswayipele ngokwakhe ikhredit khadi okanye ikhadi lamanqaku lakhe.
Hlikihla izandla ngesanithayiza yezandla emva kokosula umatshini wekhredit khadi.
Xa abathengi behlawula ngemali ezinkozo kufuneka bazame ukuba nemali eqingqiweyo engenatshintshi.
Kungcono ukuba iintlawulo zemali ezinkozo zibekwe kwikhonteyina ize isiwe kwikheshiya. Kuphephe ukudluliselwa kwemali ezinkozo ngesandla iye kwesiny' isandla.
Emva kokudlulisela ikhonteyina kwikheshiya, ikheshiya kumele nayo iyibeke itshintshi kwikhonteyina – ize isanithayize izandla.
Kufuneka zishiywe kwikhonteyina iitipsi. Musa ukuzibamba iitipsi. Baphe iitipsi ezisuka kwikhonteyina uze uzifake kwenye ikhonteyina eyahlukileyo yeetipsi.
Emva kokuyiqongqotha ikhonteyina, umcedi kufuneka asanithayize izandla zakhe. Kwakhona abathengi kufuneka bazisanithayize izandla zabo kule ndawo.
Ekupheleni kosuku ngalunye zicoce iipompo kunye nezixhobo ezizingqongileyo ngokuzosula ngomxube webhlitshi. Xuba ibhlitshi eyi-30ml kwilitha nganye yamanzi.
Banike uze ubakhuthaze abathengi ukuba batshintshele ekuthengeni kwi-intanethi.
Ngokufanelekileyo, ukuthenga kwi-intanethi kufanele kuhambe nenkonzo zokuhanjiswa kwempahla.
Ukuba ayikho inkonzo yokuhanjiswa kwempahla, banike icandelo elahlukileyo levenkile ukuze bazithathe kulo iiodolo zabo.
Ukuqokelelwa kwee-odolo ezenziwe ngumthengi kwi-intanethi kumele kwenziwe ngokwenkqubo yokumisela amadinga okuzokuzithatha.
Icandelo elahlukileyo levenkile limele lenzelwe ukuthathwa kweeodolo ezenziwe kwi-intanethi.
Inkqubo yokufikelela neyokuma emngceni ukuzokuthatha iiodolo ezenziwe kwi-intanethi zimele zilungiselelwe ngokusekelwe kwezi ndlela zingezantsi.
Gcina iingcango zivulekile ukunciphisa ukubanjwa kwezibambicango.
Inani labantu ngaphakathi evenkileni (kuquka abasebenzi nabathengi limele libe limiselwe kumntu omnye ngeemitha zezikwere ezi-6 (o.k.t. umgangatho mawohlulwe ngeemitha ezi-6).
Beka abasebenzi kumnyango wokungena evenkileni ukuze balathise abathengi isango lokungena/lokuphuma kwaye babek' iliso emgceni. Abasebenzi ababekwe emnyango evenkileni kufuneka babeke iliso kwinani labantu abasevenkileni nangaliphi na ixesha.
Xa ivenkile igcwele, abathengi kufuneka benze umgcelele ngaphandle okanye banikwe ixesha lokuphinda babuye. Xa sele kugcwele, kufanele bangavunyelwa abanye abantu ukuba bangene de kubekho abanye abaphumayo.
Phawula umgangatho izithuba ezingange-1,5 phakathi kwesinye nesinye ukubonisa ukuba kufuneka bame phi abathengi emgceni kunye nokubakhuthaza abathengi basebenzise iitroli njengendlela ukuchaselane omnye komnye.
Babonise abathengi ukuba mabashiye isithuba phakathi kweetroli kunye nomnye umntu kwaye ubabonise ukuba mabame emva kweziphawulii zesithuba ezisemgangathweni ngelixa belindile ngaphandle.
Zisanithayize iitroli zokuthenga kunye nezibambi zeebhaskiti emva kokusetyenziswa kwaxo ngabathengi.
Banike abathengi izosuli sokusanithayiza kwiindawo zeetroli/zeebhaskithi.
Ukuba kunokwenzeka, zisuse iibhaskiti zokuthenga uze uvumele kuphela ukusetyenziswa kweetroli nanjengoko oku kuncedsa kuchaselwano.
Nabanina ongena evenkileni kufuneka anxibe imaski yelaphu kwaye kufuneka asanithayize izandla kuqala.
Lilungu elinye kuphela kwindlu nganye ekufuneka livunyelwe ukuba lingene evenkileni kwaye omnye umntu okhaphayo kufuneka ame ngaphandle kwivenkile. (Kwiimeko ezikhethekileyo, ezifana, umz. umnt' omdala ohamba nomntwana, nceda usebenzise ingqiqo yakho).
Ii-Aisles kunye neemveliso
Yenza indlelana emakuhanjwe ngayo eya kwii-aisles (o.k.t. yenza "indlela enye" eya kwii-aisles “one-way”) ngokubeka amatolo abonisa icala emakuhanjwe ngalo emgangathweni.
Zithi saa izinto ezikumashelufu ukuze unciphise ukuxinana kwabantu.
Beka umqondiso ochazayo ukuba abathengi mabakhethe abakufunayo phambi kokuba bayibambe into ukuze bakabambi izinto ezininzi.
Gcina uchaselwano phakathi kwabathengi kwiindawo zokubhatala ezithilini usebenzise izithuba eziphawuliweyo ezingumgama we-1.5 phakathi kwazo ukubonisa indawo ekukhuselekileyo ukuba ume kuyo.
Izikhuseli iiPerspex guards zingafakelwa kwiindwo zethili ukwenza umqobo phakathi kweekheshiya nabathengi. Ukuba zifakelwe ezi zikhuseli zifanele zicocwe rhoqo ngokusebenzisa isepha, amanzi kunye nesibulalintsholongwane (xuba ibhlitshi okanye umxube wealkhoholi).
Kufanele kubekho umqondiso oyalela abasebenzi ukuba bangazibambi izikhuseli iiPerspex guards.
Qwalasela ukubeka ikheshiya kwindawo yethili endaweni yokubeka ikheshiya nomnye umntu opakishayo. Ukuba oku akunakwenzeka, indawo yethili yilungiselele ngendlela eqinisekisa uchaselwano phakathi kwekheshiya nomntu opakishayo.
Qwalasela kuphela ukusebenzisa ezinye iithili xa iindawo zeethili zisondelelene kakhulu kwaye akukho sikhuseli sinokufakwa phakathi kwazo.
Iikheshiya nabapakishi kufuneka bazisanithayize izandla zabo ngaphambi nasemva kokunceda umthengi ngamnye.
Ukongeza, naye umthengi kufuneka asanithayize izandla zakhe ngaphambi kokuba ancedwe. Ikheshiya kufuneka itshize izandla zomthengi ngesanithayiza endaweni yokunika umthengi ibhotile yesanithayiza.
Kufanele kukhuthazwe ukuhlawula ngohlobo oludijithali. Nangona kunjalo, apho kusetyenziswa khona oomatshini bamakhadi, bacele abathengi ukuba bawaswayipe ngokwabo amakhawabo wamanqaku/wekhrediti endaweni yokuwanika ikheshiya.
Ukuba abathengi basebenzisa iibhegi zabo zokuthenga, bakhuthaze ukuba bazihlambe qho iibhegi zabo emva kuzisebenzisa.
Umphezulu wendawo, ithili kunye nomatshini wekhadi kufuneka asanithayizwe qho emva kokusetyeniswa ngumthengi ngamnye. Iikheshiya kufuneka zisanithayize izandla zazo emva kokuba zosule umphezulu wendwo, ithili kunye nomatshini wekhredit khadi.
Iivenkile zokutya ozinceda ngokwakho kuzo
Iivenkile zokutya ozinceda ngokwakho kuzo apho ukutya okufana neesaladi, kwaye nokutya okuphekiweyo kushiywe kungavalekanga ncam ukuze abathengi bazikhelele ngokwabo, kzimele zivalwe.
La manqaku okutya kufuneka aguqulwe abe apho abasebenzi basebenzela abathengi ngokufaka ukutya kwizikhongozeli.
Apho kuthengiswa khona imveliso entsha, kumele kubekho umqondiso okhuthaza abathengi ukuba bakhethe into abayifunayo phambi kokuyibamba, ukwenzela ukuba abathengi bangabambi izinto ezininzi ezinokuthi zisasaze ulosuleleko.
Bonke abantu abasebenza evenkileni bafanele ukuba banxibe imaskhi yelaphu.
Buza abasebenzi nabantu abakuncedayo malunga neempawu zosulelo lwentsholongwane yekhorona kwaye ukuba banazo, bathumele ke kwiziko lovavanyo.
Musa ukuyibamba imaski. Yikhulule imaski ngokuyibamba ngemitya yayo. Hlambisisa izandla zakho emva kokuyikhulula imaski.
Bacele abathengi ukuba banxibe imaski.
Kubaluleke kakhulu kuwe nakubo bonke abasebenzi ukuba nizihlambe izandla okanye nisebenzise isanithayiza yealkhoholi phambi kokuvula ivenkile yakho.
Ukuba unevenkile ngaphakathi kufuneka uqiniseke ukuba abantu bachaselene ngangaphezulu kwe-1,5 yeemitha ngaphakathi evenkileni. Unokungafuni ukuvumela ukungena kwabantu abangaphezulu kwaba-2 ngexesha, kuxhomekeke kubukhulu bevenkile.
Beka iziphawuli phantsi ezibonisa ukuba mabame phi abathengi ukuze bachaselane kangangeemitha eziyi-1,5 phakathi komnye nomnye. Oku kunokwenziwa ngokuzoba imigca phantsi okanye ngokubeka izitikha ezimibalabala phantsi.
Bacele abathengi ukuba bangayibambi impahla.
Beka iisithinteli seglasi ecacileyo kwindawo yethili kweli cala lomphakathi wevenkile uze ubeke imiqondiso uze ubacele abantu ukuba bangasibambi isithinteli.
Ukuba uneepakethi ezicocekileyo ezingasetyenziswanga uze ufake izinto kuzo phambi kokuzidlulisela kumthengi.
Musa ukuzibamba izandla zomthengi xa umdlulisela ipakethi yakhe. Gcina umgama ngokuyibeka phantsi ipakethi aze yena umthengi azithathele ipakethi yakhe.
Ukuba abathengi beza nezabo iipakethi, badlulisele ke izinto zabo ngaphandle kokubamba izandla zabo.
Bacele abathengi ukuba bahlawule ngemaliqingqiweyo engenatshintshi
Ukuba kukhuselekile ukwenza njalo, mcele ke umthengi ukuba ayifake imali kwibhokisi evulekileyo ukuze ukwazi ukuyibala ukuba yimalini. Akufuneki bayibambe le bhokisi.
Yifake imali kwikhonteyina ekhuselekileyo emva kokuthengisa ngaphandle kokuyibamba imali.
Mnike umthengi itshintshi esuka kwikhonteyina 'yemali ecocekileyo' ukuba kukhuselekile ukwenza oko. Imali ecocekileyo yimali ubusele uyicocile ngesanithayiza yealkholi kwngaaphambili okanye engakhange iphathwe kangangeentsuku ezisi-7.
Ukuba oku kungasentla akunakwenzeka, tshiza ke ngoko izandla zabathengi ngesanithayiza yealkhoholi phambi kokuba bakunike imali.
Hlikihla izandla zakho ngesanithayiza yealkhoholi qho emva kokuthath' imali naxa unikezela ngetshintshi.
Tshiza izandla zabathengi ngesanithayiza yealkhoholi.
Apho kunokwenzeka khona sebenzisa iindlea zokuhlawula ngeintanethi ezifana ne-'Snapscan 'kunye ne-'tap'.
Yosula rhoqo umphezulu wetafile, okanye indawo yethili ngesanithayiza yealkhoholi.
Qinisekisa ukuba iindawo zekhitshi elisetyenziswa ngumntu wonke ligcinwa licocekile ngokulungiselela amaxesha okuzicoca kuquka irosta yokucoca ukuba ngamashishini amaninzi asebenzisa kwa esi sakhiwo sinye.
Lawula isango lokungena evenkileni kunye neendawo zethili njengoko kuchaziwe ukwenzela iivenkile ezinkulu.
Zibeke izinto ngendlela ezibokala kakuhle ngayo kubathengi ukuze abathengi nabasebenzi bangazigili xa behamba bedlula kuzo.
Zibeke ngokufanelekileyo iimpahla ukuze bazibonele ubukhulu bazo abathengi ngaphandle kokukhangela bephathaphatha iimpahla ezininzi.
Ngokufanayo, waveze abonakale ngokucacileyo amaxabiso wezinto ukuze abathengi bangazibambi babe bekhangela ukuze balifumane ixabiso.
Bakhuthaze abathengi bangabamb' abambi izinto ezininzi phambi kokukhetha le bayifunayo.
MUSA "ukuzixuba kwibhokisi enye izinto/impahla ezithotywe ixabiso" nanjengoko abathengi kungafuneka babe begqogqagqoqga kuzo.
AKUFANELANGA asetyenziswe amagumbi okulinganisel' impahla.
Qinisekisa ukuba ivenkile yakho inomgaqonkqubo ocacileyo wokubuyiswa kwempahla yokunxiba.
Impahla ezibuyisiweyo kufuneka zigcinwe ngokwahlukeneyo kwezinye iimpahla kwindawo ekhethiweyo kwaye akufuneki zithengiswe kangangeveki e-1 emva kokuba zibuyisiwe, nanjengoko zakube zifile naziphi na iintsholongwane ebezikuzo.
Iinkonzo ekubanjwana kuzo ixesha elide (iindawo zokwenz' iinwele, ispa, indawo yamazipho, indawo yokolul' umzimba)
Ukuncitshiswa kokum' emgceni ngokusebenzisa iinkqubo zokuqesha kangangoko kunokwenzeka.
Apho kufuneka khona ukum' emgceni, qinisekisa ukuba abathengi bayakuthobela ukuchaselana ngokubeka iziphawuli emgangathweni ukohlula ngesithuba esiyi-1.5m. Kuphinde oku ngokubonisa imiqondiso efanelekileyo uze ubeke umsebenzi wokubek' iliso koku abone ukuba kuyenzeka kusini na.
Ukuba iyasetyenziswa indawo yokulinda, bahlalise abantu kude omnye komnye kwaye ulinciphise inani elinokwamkelwa. Ukuba igcwele indawo yokulinda, bakhuthaze abathengi ukuba benze idinga okanye baphinde babuye kamva endaweni yokum' emgceni ngaphandle kwendawo yokulinda.
Abasebenzi kufuneka bacoceke izandla zabo ngaphambi nasemva kwalo naluphi na unxibelelwano lomzimba lwabo nabathengi.
Qwalasela ukusebenzisa izithinteli zeskrini ze-perspex ukwenza isithinteli phakthi kwabathengi nabasebenzi kwakhona naphakathi kwabathengi.
Bayekisa ukubambabamba iimveliso abathengi. Endaweni yoko kufuneka bacele uncedo kubasebenzi.
Musa ukubabonelela abathengi ngeemagazini okanye ngamaphephandaba.
Musa ukubanika ukutya abathengi.
Iigloves azikhuthazwa ngaphandle kokuba zinokusetyenziselwa kuphela ukudibana ngokomzimba zize zilahlwe emva koko. Ukuba oku akwenzeki ke kuya kufuneka abasebenzi bahlambe okanye bacoce izandla zabo phakathi kokudibana ngomzimba ngakunye.
Abathengi kunye nabasebenzi abazakuthi basondelelane kakhulu mabanxibe imaski yelaphu ngamaxesha onke.
Izinto/izixhobo eziye zadibana nabaxumi kufuneka zicocwe ngaphambi kokuba ziphinde zisetyenziswe.
Apho kunokwenzeka khona sebenzisa izinto ezilahlwayo okanye ucele abathengi ukuba bazithengele ezabo, umz. ifayile yesikhonkwane.
Uvavanyo lomngcipheko malwenziwe kwindawo nganye entsha ngaphambi kokuqalisa ngokwakha. Oku kumele kwenzeke kangangoko kunokwenzeka ngoncedo lwabasebenzi bezempilo nokhuseleko lwabasebenzi.
Qhubeka nokusebenzisa iiPPE zokhuseleko ezifunekayo kumsebenzi ngamnye wokwakha.
Apho kunokwenzeka khona ukuba mazisetyenziswe kunye nezinye izixhobo zokhuseleko, iimaski zelaphu mazisetyenziswe ngabo bonke abasebenzi.
Kufanele kungabikho ukwabelana ngeZixhobo zoKhuseleko (iPPE)
Apho kunokwenzeka khona, musa ukwabelana ngezixhobo.
Ukuba kufuneka kwabelwane ngezixhobo, zicoce ke ngesanithayiza yealkhoholi yezandla ngaphambi kokuba sisetyenziswe ngumntu olandelayo.
Ukuhamba uye emsebenzini nakwiisayithi zokwakha kufanele kuhambisane nemimiselo yochaselwano kwaye zonke iifestile zesithuthi kufuneka zihlale zivuliwe kuwo wonke lomgama wokuya emsebenzini. Kuvumeleke kuphela abakhweli abaziipesenti ezingama-50% (isiqingatha senani eligcwalisa isithuthi eso) bonke abakhweli kufuneka banxibe iimaski. Xa bengena naxa bephuma kwisithuthi abakhweli, kufuneka bonke basanithayize izandla zabo. Isithuthi sifanele sicocwe yonk' imihla.
Abaphathi besayithi kufuneka bayile iindlela zokusebenza ezivumela uchaselwano ngomgama oyi-1.5 phakathi kwabasebenzi kwaye balinciphise inani labasebenzi abakwisayithi
Akumelanga kwabelwane ngezixhobo okanye ukuba akunakwenzeka oko, kufuneka ke izixhobo zicocwe qho phambi kokusetyenziswa
Abaqeshi kufuneka baqinisekise ukuba kuyafikeleleka kwisepha namanzi, kwisanithayiza yezandla nakwimigqomo yokulahla inkunkuma kwiindawo ezahlukeneyo ezijikeleze isayithi
Ukuba kunokwenzeka, ziphehe izindlu zangasese eziphathwayo, nangona kunjalo, ukuba aziphepheki zicoce rhoqo ke (amaxesha ama-4 ngemini) ngomxube webhlitshi. Sebenzisa ama-30 ml webhlitshi uyixube ngelitha yamanzi. Nxiba iiglavu ezilahlwayo. Hlamba izandla emva koko.
Abasebenzi kunye neendwendwe kufuneka banxibe iimaksi zelaphu.
Kubaluleke kakhulu kubasebenzi ukuba bazihlambe izandla zabo phambi kokuwuqalise umsebenzi baze baphathe imiphezulu yemigangatho nezixhobo.
Kufanele ukuba ziyohlulwa iindawo/imiphezulu kubasebenzi ngomgama oziimitha eziyi-1,5.
Apho kungenakwenzeka khona ukuba uzohlule iindawo/imiphezulu, izithinteli zeglasi/iziskrini zeperspex ezicocekileyo zifanele zibekwe phakathi kwabo.
Ukuba izinto zifuna ukuba maziphathwe ngabantu abaninzi (umz. ibhanti lokuhambisa) kufanele ke kunxitywe iiglavu ezilahlwayo.
Kufuneka zikhululwe iiglavu zize zilahlwe emgqomeni nanini na xa kuthathwa ikhefu emsebenzini kwaye abasebenzi kufuneka bahlambe izandla zabo ngoko nangoko.
Coca kwaye ubulal' iintsholongwane imiphezulu esetyenziswa ngabatu (umz. amabhanti okuhambisa) emva kweshifti nganye.
Landela imiqathango yamaxesha ekhefu amiselweyo, ubagcine abasebenzi kumaqela ahlukeneyo, ubahluze abasebenzi phambi kokuba baqalise ishifti, kucucwe ikhitshi, amagumbi abasebenzi kunye nezindlu zangasese.
Kufuneka abasebenzi kunye neendwendwe banxiba imaski zelaphu ngexesha lemisebenzi yangaphakathi nangexesha bekwisithuhti.
Musa ukusigcwalisa mfi isithuthi ngabakhweli. Yigcine inesiqingatha senani labantu.
Bahlalise ngokuchaseleneyo kangangoko abakhweli kwaye uzigcine zivulekile iifestile.
Yosula izibambicango, izibambifestile kunye nezihlalo, izihlalo kunye nomva 'webhaki' ngesanithayiza yealkhoholi emva kohambo ngalunye.
Coca ngesepha namanzi uze ubulale intsholongwane umphandle wesithuthi kunye nomva 'webhaki' kabini ngosuku ngebhlitshi kunye nomxube wamanzi. Xuba ibhlitshi eyi-30ml kwilitha nganye yamanzi. Yicoce qho emva kokuphela komsebenzi wosuku (umz. emva komsebenzi wakusasa kwakhona emva komsebenzi wangorhatya).
Fumana amaxwebhu achanekileyo ukwenzela abasebenzi bamaxesha athile ukuze bakwazi ukuya emsebenzini kwaye babuyele emakhaya, phambi nasemva komsebenzi wamaxesha athile. Ezothutho kufuneka zicwangciswe ngendlela ekhuselekileyo njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Abasebenzi kufuneka bacetyiswe ngokuba ucoceko lwezandla kunye nokucoceka lwemiphezulu yemigangatho alupheli xa kuphela umsebenzi, kodwa lumele luqhutywe nasemakhaya.
Kumele kubonelelwe ngofikelelo emanzini, kwibhlitshi kunye nesanithayiza yealkhoholi ukuze isetyenziswe ekhaya.
Landela imigaqo ngokubanzi yekhefu elimisiweyo, ukugcina abasebenzi bengamaqela ahlukeneyo, ukuhluzwa kwabasebenzi ngaphambi kokuba baqale ishifti, ukucoca iindawo zokuhlala kunye nezindlu zangasese zomntu wonke.
Uthintelo loDluliselo lweCOVID-19
Fundisa abasebenzi, amavolontiya, izigulana/abahlali kunye neendwendwe malunga neCOVID-19
Nika unxibelelwano rhoqo kwiintsapho zezigulana/zabahlali malunga namanyathelo owathathayo okuthintela ukudluliselwa kunye nokulawulwa kweziganeko zolosuleleko lweCOVID-19.
Bahluzele iimpawu zeCOVID-19 abasebenzi yonk' imihla (Jonga iinkcukacha kwiCandelo A apha ngasentla)
Zihluze yonk' imihla izigulana/abahlali (kuquka nobushushu) ukujonga iimpawu zeCOVID-19.
Zihluze izigulana/abahlali abatsha kwiziko ngexesha besamkelwa.
Qinisekisa ukuba iziko lonyula indawo eyodwa yokunxwemela nokunakekelela kuyo izigulana/abahlali abafumaneka benePUI/abafunyaniswe beneCOVID-19.
Utyelelo lumisele kuphela ukuzokunika uvelwano okanye kuphela kwimeko yokuba isigulana siza kusweleka. Yazisa iintsapho ukuba uza kuziqwalasela izicelo zokundwendwela ezingaphandle kwezi meko kwimeko nganye.
Xa luvumelekile undwendwelo, zihluze iindwendwe phambi kokuzivumela ukuba mazingene kwiziko kwaye uqinisekise iindwendwe zinxibe iimaski zelaphu.
Ukuba umhlali/isigulana esityelelweyo sifunyenwe sineCOVID-19 kwaye iindwendwe ziza kunxibelelana ngokusondeleyo nomhlali/nesigulana, kufuneka ke ngoko iindwendwe zinxibe imaski, iigogles, iaproni kunye neeglovu.
Ukuba umhlali/isigulana esityelelweyo asikrokrelwa ukuba sineCOVID-19, kungafuneka ke ngoko ukuba kunxitywe imaski yelaphu kunye neaproni.
Qwalasela undwendwelo ngeintanethi ukuba luyenzeka, umz. ngokusebenzisa ividiyo yokubamb' inkomfa.
Qinisekisa ukuba kukho umgama wochaselwano oyi-1.5 phakathi kwabahlali/kwezigulana.
Yirhoxise imisebenzi yamaqela unciphise izithuba kwiindawo ekudibana kuzo abantu kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba kusetyenziswa iholo yokutyela, cinga ngamaxesha okutya amisiweyo. Ngenye indlela, cinga ngokubazisela ukutya kwabo abahlali/izigulana emagumbini wazo.
Apho kufuneka kudityanelwe unyango khona (umz. nengcali yezonyango engaphandle kweli ziko), qwalasela ukudibana ngefowuni.
Kwimeko yokungabikho kokunxibelelana rhoqo loluntu, yomeleza impilo yengqondo/inkxaso yengqondo kwabahlali/kwizigulana.
Kufuneka abahlali/izigulana zinxibe imaski yelaphu ngaphandle kokuba zikumagumbi wazo abocala.
Abahlali/izigulana ezinokhubazeko ngengqondo okanye ezinokuba nobunzima bokunxiba imaski yelaphu kufuneka banxwenywe kwanye abahlali/izigulana kangangoko kunokwenzeka.
Kufuneka abasebenzi banxibe iPPE efanelekileyo ephawulwe kwiZikhokelo zePhondo zoSetyenziso lwePPE.
Ukulawulwa komhlali/kwesigulana esifunyenwe sineCOVID-19:
Ukuba umhlali/isiguli sineempawu ezihambelana neCOVID-19, kufuneka banxwenywe bodwa kwigumbi elichongiweyo.
Lungiselela ukuba avavanywe umhlali/isigulana kwaye uqhubeke ngokumnakekela umhlali/isigulana kwigumbi elichongiweyo ngelixa esalindele iziphumo zovavanyo.
Linciphise inani labasebenzi abangena kwigumbi libe ngumsebenzi omnye kuphela ongena kulo ngeshifti nganye.
Kwimeko yomhlali okhubazeke ngengqondo kwaye akanakho ukunxwenywa, qwalasela ukumbeka ekhusini kwigumbi elichongiweyo abekunye nomsebenzi owonyuliweyo okanye nomsebenzo omnye ngeshifti nganye. Kufuneka abasebenzi banxibe iPPE efanelekileyo (Jonga kwiZikhokelo zePhondo zoSetyenziso lwePPE.)
Babeke ekhusini abahlali/izigulana kunye nabasebenzi abanxibelelane ngokomzimba nomhlali ogulayo.
Ukuba umhlali/isigulana sifumaneka sineCOVID-19, qhubeka ngokubanxwema kwaye ubek' iliso kwimeko yabo yonyango ukuze uhlole imfuneko yonakekelo olongezelelekileyo (umz. ukwamkelwa esibhedlele).
Ukuba kufuneka ungeniswe esibhedlele, qhagamshelana nesona sibhedlele sikufuphi uze ulungiselele ukuthuthwa ngenqwelo yezigulana.
Ukuba baninzi abahlali/izigulana ezifunyaniswe zineCOVID-19 kwiziko, umhlali/isigulana ngasinye sinxwenywe kwigumbi sodwa kwigumbi elinye.
Apho kungenakwenzeka khona ukunxwenywa kwesigulana kwigumbi elinye, qwalasela ukuzifaka kwigumbi elikhulu elinye izigulana ezineCOVID-19.
Musa ukubadibanisa abahlali/izigulana eziqinisekisiweyo ukuba zinePUI kunye nezineCOVID-19.
Zigcine izigulana zePUI zahlukene esinye kwesinye kangangoko kunokwenzeka, nanjengoko phakathi kwabanye abahlali/izigulana zisenokubakho ezineCOVID-19 zibekhona nezingenayo.
Bagcine bohlukene abasebenzi abakwezi ndawo, o.k.t. qinisekisa ukuba abasebenzi abasebenza kwiindawo zeCOVID-19 ngaphakathi kwiziko lakho abasebenza kwiindawo ezingezizo ezeCOVID-19.
Abasebenzi abahambisa ukutya ufuneka banxibe iPPE efanelekileyo (Jonga kwiZikhokelo zePhondo zoSetyenziso lwePPE.)
zithathe ngokuba zosulelekile izitya, amacephe kunye neetreyi ezisetyenzisiweyo ezisuka kubahlali/kwizigulana kwaye abasebenzi bokutya kufuneka banxibe iiglavu xa bephathe ukutya.
Yithathe ngokuba ingcolisekile ilineni evela kubahlali/kwizigulana ezinePUI/COVID-19.
Kusebenza inkqubo yendlela yokupakisha kunye nokutywina, ukuqokelela kunye nokuhlanjwa kwelineni engcolisekileyo.
Kusebenza inkqubo yeendlela zokuqokelelwa nokulahlwa kweengxowa ezibomvu ezinenkunkuma eyosulelayo.
Inkunkuma evela kumagumbi wabahlali/wesigulana ezinePUI/COVID-19:
Inkunkuma kufuneka ilahlwe kwiibhokisi ezenzelwe ukulahla inkunkuma yonakekelo lonyango ezinemigca ebomvu emi-2 (iibhegi eziphindwe kabini)
Yona le ingaphakathi ibhegi kufuneka iqhinwe xa ikufutshane ekugcwaleni.
Yona le ingaphandle iqhinwe ngentambo ize ivalwe ibhokisi ize ifakwe iseloteyipu.
Ibhokisi yenkunkuma engumngcipheko kunakekelo lwempilo (HCRW) kufuneka iphawulwe ngokucacileyo u-“COVID-19” kwaye kufuneka isiwe kwindawo ekubekwa kuyo izinto zeziko leHCRW.
AmaNyathelo aphathekayo okuLungiselela iZikolo, ooTitshala kunye naBafundi
UHlolo loMngcipheko lwabafundi kunye nabasebenzi besikolo
Bandakanya inkxaso yabazali kunye nabanakekeli ukuba bolathe abafundi kunye nabasebenzi bezikolo abakumngcipheko omkhulu wesifo esimandundu (umz. immunocompromised, izigulo ezingapheliyo) uze usebenze nabo ukwenza amalungiselelo okufundel' ekhaya apho kunokwenzeka khona.
Ukuqeqesha ootitshala nabasebzi abancedisayo
Qeqesha ootitshala nabasebzi abancedisayo kwezi zinto zilandelayo (ubuncinci):
Indlela esasazeka ngayo iCOVID-19
Zeziphi iimpawu zeCOVID-19
Ngawaphi amanyathelo ekumele athathwe ukunqanda ukunwena kweCOVID-19
Indlela yokuyinxiba, yokuyikhulula, yokuyigcina kunye nokuyicoca imaksi yelaphu
Yintoni ekumele uyena xa banazo naziphi na iimpawu ezihambelana neCOVID-19
Yintoni ekumele uyenze ukuba bafunyaniswe beneCOVID-19
Yintoni ekumele uyenze xa bebedibene nomntu ofunyaniswe eneCOVID-19
Indlela yokuhlamba nokusanithayiza izandla zabo
Indlela yokuthetha nabafundi malunga neCOVID-19 ngendlela efanelekileyo ehambelana neminyaka yabo
Bafundisa abafundi ngezi zinto zidweliswe ngasentla.
Zama ukuhlanganisa izixhobo ezifanelekileyo zokufunda eziphindaphinda ukudlulisa umyalezo wemikhwa yentsholongwane yekhorona/yothintelo losuleleko.
Sebenzisa iividiyo, imidlalo kunye neengoma ukudlulisela ngcono umyalezo kubafundi.
Yomeleza amajelo onxibelelwano nabazali/nabanakekeli.
Qinisekisa ukuba isikolo sineenkcukacha zamva nje zoqhagamshelwano (iinombolo zonxibelelwano needilesi zasekhaya) zomzali/zomnakekeli ngamnye. Oku kuya kubaluleke kakhulu ukuba kuye kwabakho iimeko ezibonwayo esikolweni kwaye kufuneka ubabeke ekhusini abafundi.
Qinisekisa ukuba isikolo sineenkcukacha zamva nje malunga nokuba ngubani ogunyazisiweyo ukuba azokuthatha umfundi esikolweni.
Qinisekisa ukuba abazali/abanakekeli bayayazi imigaqonkqubo kunye neeprothokholi zesikolo ezinxulumene neCOVID-19.
Nxibelelana nabazali/nabanakekeli abanenkxalabo malunga nokhuseleko lomntwana wabo.
AmaNyathelo aPhathekayo okuThintela uloSuleleko lweNtsholongwane yeKhorona eZikolweni nakwiKhretshi
Hlala ekhaya xa ungaphilanga
Nabani na (ootitshala, abasebenzi abanik' inkxaso, abafundi) makahlale ekhaya ukuba akaphilanga aze aqhagamshelane neziko lephondo loncedo lweCOVID-19 kule nombolo 021 928 4102 ukufumana isikhokelo malunga nokuvavanywa ukuba ngaba iimpawu zikrokreleka ukuba zezeCOVID-19.
Isikolo kufuneka siyinyanzelise ngokungqongqo imithetho malunga nokuhlala kwabafundi ekhaya xa bengaphilanga kwaye bababaxelele abazali/nabanakekeli.
Ukuhluza ootitshala nabasebzi abancedisayo
Bonke ootitshala nabasebenzi abanik' inkxaso kufuneka bahluzwe yonke imihla ukufumanisa iimpawu zolosuleleko lwentsholongwane yekhorona esikolweni. Apho ikhoyo khona, ithemomitha engabanjwayo (ithermal skena) sinokusetyenziselwa ukukhangela ubushushu. Iqondo lobushushu elingaphezulu kwama-38 libonakalisa ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona.
Nawuphi naumsebenzi oneempawu ezibonakalisa ukuba neCOVID-19 kufuneki angavunyelwa ukuba awuqalise umsebenzi. Kufuneka banikwe imaski yokuhlinzwa okanye imaski yelaphu, kufuneka bahlambe izandla, kwaye bathuthelwe kwiziko lokuvavanyela intsholongwane yekhorona.
Abafundi kufuneka bahluzwe ukufumana iimpawu zolosuleleko lwentsholongwane yekhorona xa befika esikolweni.
Isikolo ngasinye kufuneka sithathe isigqibo malunga neyona ndlela ingcono yokubahluza abafundi ngokwezibonelelo ezifumanekayo esinazo isikolo. Izikolo zinokusebenzisa isixhobo sohluzo ngekhompyutha okanye isixhobo sephepheni. Lufanele lwenzeke uhluzo esangweni lokungena esikolweni kwaye lunokwenziwa kutitshala/ngumsebenzi otyunjelwe oko.
Kwiikhretshi/abafundi abancinci abangakwaziyo ukuthetha bachaze iimpawu abanazo, qwalasela ukubaka iphepha lokuhluza iimpawu encwadini yabantwana yokunxibelelana esetyenziswayo ezikolweni phakathi kwesikolo nabazali/nabanakekeli. Cela abazali ukuba balisayine yonk' imihla iphepha babhale kulo ukuba ingaba unazo kusini na iimpawu okanye hayi impawu ezidwelisiweyo. Ukuba ikhona ekhaya ithemomitha, abazali banokujonga baze babhale phantsi ubushushu bomntwana wabo yonk' imihla. Njengazo zonke izinto, ukuphathaphathwa kwale ncwadi kufuneka kuncitshiswe kwaye kufuneka zisanithayizwe izandla emva kokuyiphatha.
Ootitshala, abazali/abanakekeli kunye nabafundi kufuneka babenolwazi ngeenkqubo eziya kulandela kwimeko yokufunyaniswa komfundi enentsholongwane, o.k.t. ukuba nezinye zeempawu ezibonakalisa ukuba nolosuleleko lwentsholongwane yekhorona.
Ukuba umfundi unazo naziphi na iimpawu ezibonakalisa ulosuleleko lwentsholongwane yekhorona:
Akasayi kuvunyelwa umfundi lowo ukuba angene esikolweni. Umfundi lowo makanxwenywe yedwa kwindawo elungiselelwe oko kwalapha esikolweni (umz. kwindawo yokubeka abagulayo) uze umnike imaski ukuba akanayo eyakhe. Kufanele kuqhagamshelwane nomzali/nomnakekeli aze acelwe ukuba azomthath' umntwana ngoko nangoko. Vumela utitshala/umsebenzi omnye kuphela ukuba abe nokunxibelelana nomfundi ngelixa elinde umzali/umnakekeli.
Umfundi unokubuyela esikolweni nje emva kokuxilongwa ngugqirha kumaziko abucala okanye karhulumente ovavanyo lwentsholongwane yekhorona, ukuba kufunyaniswe ukuba akanayo intsholongwane yekhorona. (Bungafuneka ubungqina bovavanyo.)
Ukuba kubonakala ngathi unentsholongwane yekhorona kwaye uvavanyiwe, uza kufuneka ukuba anxwenywe ke ngoko ekhaya okanye kwiziko lokunxwemela abosuleleke yile ntsholongwane. Ukuba kunokwenzeka oku kuza kufuneka ukuba isikolo sisebenzise indlela yokuqhubeka komfundi nokufunda.
Ukuba uye wagula umfundi ngexesha lesikolo esesikolweni
Mnxweme ngoko nangoko umfundi umbeke kwindawo eyenzelwe oko (umz. indawo eyenzelwe abagulayo) uze ulandele ubungqina obunikwe ngasentla kwimeko uthe xa ehluzwa wabonakalisa iimpawu zokuba nentsholongwane.
Kwimeko yomfundi onophawu olubonakalisa ukuba nentsholongwane esenziwa uhluzo okanye egula ngexesha lesikolo, akukho mfuneko yokuba banxwenywe abantu ebebesondelene nomntwana ngelixa umfundi esalinde iziphumo.
Ukunxwenywa kwabo bebesondelene kakhulu nomntwana kwakufuneka kuphela xa iziphumo ziqinisekisa ukuba umntwana ufunyaniswe ene-COVID-19.
Ukothulwa nokuthathwa kwabantwana:
Qwalasela amaxesha amiselwe ukothula nokukhwelis' abantwana ukunciphisa inani labantu (abazali kunye nabafundi) esikolweni ngala maxesha.
Endaweni yokuvumela abazali/abanakekeli ukuba bangene ngaphakathi kwisakhiwo sesikolo, yiba notitshala weklasi nganye esangweni lesikolo ukuba adibane nabafundi bakhe ekuqaleni kosuku aze abakhaphe ngexesha lokuba bazokuthathwa. Beka umsebenzi esangweni lesikolo ukuba alungiselele le nkqubo uze uqinisekise ukuba ootitshala bayayazi ukuba ngubani ekumele azokuthath' umntwana.
Apho kunokwenzeka khona ootatomkhulu/oomakhulu kunye nabanakekeli abadala bafanele bangabothuli okanye babathathe abantwana esikolweni kuba bangasemngciphekweni omkhulu wokosuleleka ngesifo esimandundu.
Iinkonzo zokuthutha abafundi
Izithuthi ezithutha abantwana besikolo kufuneka zilandele isikhokelo seenkonzo zezithuhti zikawonke-wonke o.k.t. akufuneki lidlule kwiipesenti ezingama-50% inani labakhweli, abakhweli bafanele bachaseelane kangangoko kunokwenzeka, zonke iifestile kufuneka zihlale zivuliwe kwaye isithuthi sona kufuneka sicocwe rhoqo. Bonke abakhweli kufuneka banxibe iimaski zelaphu ngalo lonke ixesha sihamb' isithuthi.
Umqhubi kufuneka ahlale ngaphakathi kwisithuthi kangangoko kunokwenzeka, xa Kangangoko kunokwenzeka, umqhubi ufanele ukuhlala emotweni ngexesha lokukothulwa nokuthathwa kwabantwana.
Ukuhambisa abafundi kumthamo wabakhweli abangama-50% kuya kuthetha ukwanda kweetripu kwaye kungoko kuza kufuneka izithuthi ezininzi okanye kwandiswe amaxesha okuthathwa kwabantwana nexesha leeklasi landiswe (abafundi bangene ngamaxesha ahlukeneyo).
Ootitshala bafanele ibengabo abasuka eklasini baye kweny' iklasi endaweni yokufuna ibengabafundi abasuka kweny' iklasi baye kwenye.
Beka isanithayiza emnyangweni weklasi nganye uze uqinisekise nabani na ongenayo okanye ophumayo eklasini uyazisanithayiza izandla zakhe.
Iidesika kufuneka zilungelelaniswe ngokwemigca zijonge phambili ukunciphisa ukuba bajongane abafundi ubuso ngobuso.
Kumele ibe ngumfundi omnye kuphela kwidesika nganye.
Abafundi mafanele bahlale kwidesika enye mihla le.
Chasanisa iidesika ziqelelane ibe kude enye kwenye ngokwesithuba esikhoyo eklasini.
Zivule zonke iifestile kwaye uzigcine zivulekile iingcango kangangoko kunokwenzeka ukuze nkungene umoya owaneleyo.
Zicwangcise ngokutsha iicwangciso zezifundo kunye nemisebenzi ukunciphisa ukwabelana ngeencwadi/ngezixhobo zokufunda nokudluliselana ngezinto.
Kufuneka bangabelani abafundi ngezinto ezifana neepeni, iirula, iikhaltyhuleyitha njl.njl.
Izibonelelo zegumbi langasese lesikolo
Beka iisanithayiza ngaseminyangweni yezindlu zangasese.
Linciphise inani labantu abangena kwindlu yangasese nangeliphi na ixesha uze ubekiliso ekubeni kungadlulwa kwinani labantu abavumelekileyo ukuba bangene.
Qinisekisa ukuba zonke izibonelelo zezindlu zangasese ziyasebenza kwaye zilungiswa ngokukhawuleza xa zonakele.
Qinisekisa ukuba amagumbi angasese anamanzi nesapha ngawo onke amaxesha.
Kufuneka zihlanjwe izandla ngesepha namanzi emva kokusebenzisa igumbi langasese.
Musa ukusebenzisa iitawuli ekwabelwana ngazo kwigumbi langasese, sebenzisa iitawuli zamaphepha ezinokulahlwa emgqomeni ovaliweyo emva kokusetyenziswa.
Makumiselwe amaxesha ekhefu ukuze ibe ngabafundi abambalwa abathath' ikhefu ngexesha kunye nokunciphisa ukuxuba abafundi beeklasi ezahlukeneyo.
Kufuneka abafundi basanithayize izandla zabo phambi kokuphuma eklasini naxa bebuyela eklasini.
Kufuneka abafundi bangahlali omnye ecaleni komnye xa behleli bengamaqela. Ukuba kukho iitafile abahlala kuzo abafundi ngexesha lekhefu, kufuneka zicocwe rhoqo ezi tafile naxa zigqiba kusetyenziswa.
Musa ukubavumela abafundi badlale imidlalo efunisa ukuba mababambane ngamaxesha ekhefu.
Izikimu zokutyisa abantwana ezikolweni
Ukulungiselelwa kokutya kufuneka kubambelele kwimigaqo yokucoceka ngokungqongqo.
Abasebenzi ababandakanyeka kulungiselelo lokutya kufuneka bahluzwe yonke imihla.
Aba basebenzi kufuneka basebenzise impahla efanelekileyo yokhuseleko (o.k.t. iiglavu, iminatha yeenwele, iaproni) xa belungisa ukutya kwaye bebambelela kwimimiselo engqongqo yokuhlamba izandla.
Qwalasela ukulungiselela izidlo ezinokutyelwa kwiikhonteyina ezilahlwayo.
Zonke izixhobo zokutya kunye neekhonteyina zokutya kufuneka zihlanjisiswe ngaphambi nasemva kokuba zisetyenzisiwe. Qwalasela ngokugcina ikhonteyina yokutya kunye nezixhobo zomfundi ngamnye ebhegini ephawuliweyo ukuba oko kuyenzeka ukwenzela ukuba umfundi angasebenzi enye ikhonteyina kodwa le inye yonk' imihla.
Kufuneka abanfundi bahlambe izandla zabo ngesepha namanzi esangweni elingena kwindawo yokutyela.
Endaweni yokumnika ngokwakho umfundi ukutya, qwalasela ukunciphisa ukuphatha ngezandla ngokukubeka ukutya etafileni apho umfundi anokukuthatha khona ukutya kwakhe.
Kufuneka icocwe qho indawo yokutyela ngaphambi nasemva kokusetyenziswa kwayo. Oku kuquka zonke iitafile, izitulo kunye neminye imiphezulu yemigangatho.
Abafundi bamele bahlaliswe kude omnye komnye, okuba oku kuyenzeka (umz. bahlale kwezinye izihlalo).
Kufuneka baphinde kwakhona abafundi bazihlambe izandla zabo ngesepha namanzi xa bephuma kwindawo yokutyela.
Iivenkilana zokuthenga esikolweni kunye nabathengisi abangaphandle kwepropathi yesikolo
Iivenkilana zokuthenga esikolweni kunye nabathengisi abangaphandle kwepropathi yesikolo funeka zingavulwa
Kufuneka bangavunyelwa abafundi ukuba bahlangane ngokwamaqela ngelixa belindele uzokuthathwa ngabazali okanye yitranspoti.
Imisebenzi eyongezelelweyo yekharityhulamu ibandakanya ezemidlalo
Imisebenzi eyongezelelweyo yekharityhulamu kunye nemidlalo nayo nayiphi na indibano yamaqela kufuneka ipheliswe.
IiNdlela zokuCoca zeSiqhelo
Landela isikhokelo esimalunga neendlela zokucoca zesiqhelo, izixhobo kunye nokusetyenziswa kwePPE yokucoca eboniswe apha ngasentla.
Qinisekisa ukuba ugcina izixhobo zokucoca, umz. umxube webhlitshi kwindawo engenakufikelelwa ngabantwana. Gcina iibhotile eziphawulwe ngokucacileyo kwaye ungaphinde uzisebenzisele ukugcina iibhotile/iikhonteyina zesiselo.
Amagumbi ezicwangciso zootitshala
Kufuneka amiselwe amaxesha ekhefu lootishala (njengalawo wabafundi) kwaye kufuneka lincitshiswe inani labantu kwigumbi labasebenzi nangaliphi na ixesha.
Nabani na ongena egumbini kufuneka aqale asanithayize izandla zakhe.
Cwangcisa ukuhlala kwigumbi labasebenzi ngendlela evumela uchaselwano kangangoko kunokwenzeka.
Kufuneka abasebenzi, kangangoko kunokwenzeka, baziphathele iilantshi kwiibhegi/kwikhonteyina eziphawuliweyo baze bagoduke nazo yonk' imihla ukuze zicocwe.
Izixhobo zasekhitshini eziphathwa ngabantu abaninzi, umz. iimicrowaves kunye neeketile maziphetshwe kangangoko kunokwenzeka. Apho zisetyenziswe khona ezi zixhobo, kufuneka zisanithayizwe rhoqo xa zigqiba ukusetyenziswa.
Zonke iitafile, izitulo, iikhawuntari kunye neminye imiphezulu yemigangatho ebidibene nabantu kumele zicocwe rhoqo.
Zimele zincitshiswe iintlanganiso zabasebenzi kwaye ngabasebenzi abaphambili kuphela abamele ukubakho ezintlanganisweni.
Kufuneka abasebenzi bakhangele ezinye iindlela zokunxibelelana, umz. incoko yeselula, ii-imeyili kunye nenkomfa yefowuni okanye yevidiyo.
Kufuneka ootitshala, abasebenzi abanik' inkxaso banxibe iimaski zelaphu.
Jonga ingcebiso apha ngasentla ezimalunga nendlela enxitywa, ekhululwa, egcinwa kunye necocwa ngayo imaksi yelaphu.
Ootitshala abanobunzima bokulikhupha kakuhle ilizwe labo xa benxibe imaski basenokuyisusa imaski xa bethetha kodwa kufuneka banxibe ikhakha lobuso/isithinteli kwaye kufuneka achasele kubafundi.
Qinisekisa ukuba abafundi kunye nabasebenzi bayaziqhelanisa nokuchaselana ngawo onke amaxesha.
Kunciphise ukusetyenziswa kweendawo zomntu wonke kangangoko kunokwenzeka kwaye ulinciphise inani labantu abavumelekileyo kwezi ndawo. Beka isanithayiza esangweni lendawo nganye kwezi.
Ngamaxesha okutya neendawo zokutyela, landela icebiso elinikwe apha ngasentla phantsi kwesihloko esithi "Izikimu zokutyisa abantwana ezikolweni".
Linciphise inani labantu abasebenzisa izibonelelo zokuhlamba/ishawari nangaliphi na ixesha ngokusebenzisa iirosta kwaye uwacoce rhoqo amagumbi angasese kanye emva kokusetyenziswa.
Musa ukubavumela ukuba mabandwendwelane kwamanye amagumbi
Tyumba igumbi ozakulisebenzisela ukunxwemela kulo umfundi ogulayo ongenakho ukuzokuthathwa ngumzali/ngumanakekeli ngoko nangoko.
IiNgcebiso eziNgqalileyo zeKhretshi
Coca rhoqo ngokwesiqhelo kwaye usanithayize yonke imiphezulu yemigangatho nezinto kuquka iithoyi kunye nezinye izixhobo/izinto zokufunda. Ukuba ezo zixhobo azinakusanithayizwa kwaye ziza kudinga ukusetyenziswa ngabantwana abaninzi, musa ukuzisebenzisa.
Musa ukuzaba izixhobo/iithoyi/iipeni njl. njl. phakathi kwabantwana ngaphandle kokuba zisanithayizwa qho xa zisetyenziswa ngomny' umntwana
Akufuneki bavunyelwe abantwana ukuba baze nezabo iithoyi emakhayeni wabo.
Gcina amaqela eklasi ahlale engaguquki kwaye ukunciphise ukudityaniswa kwabantwana phakathi kweeklasi.
Amaxesha ekhefu amisiweyo afanele akunciphise ukudibana kwabafundi abasuka kwiiklasi ezahlukeneyo.
Hlamba/sanithayiza izandla ujongwe ngootitshala:
Xa ufika esikolweni
Ngaphambi nasemva kokutya
Ngaphambi nasemva kokusebenzisa igumbi langasese
Phambi kokuphuma eklasini uye ekhefini
Xa ungena eklasini emva kwekhefu
Xa ugoduka ukuphuma kwesikolo
Amaxesh' okuthi qwaka nje kancinci
Zibeke ngokuthe qelele enye kwenye iimethi zokulala kangangoko kunokwenzeka.
Balalise ngendlela yokuba bazelane ngendlela yokuba abanye bajongise ngezantsi ezinyaweni abanye ngasentla ukuze bangazelani ngobuso.
Qwalasela ukumisela amaxesha okulala ukuba kuyenzeka oko.
Izinto zebhedi yomntwana ngamnye mazithi qelele kwezomnye uze uzigcine kwibhegi eziphawuliweyo. Iingubo namashiti mazihlanjwe rhoqo ngeveki.
Amanapukeni watshintshele kuphela kwindawo eyenzelwe oko kumgangatho onokusulwa ucoceke. Kufuneka ubekwe kwakule ndawo umgqomo wokufaka amanapukeni amdaka.
Hlamba izandla zakho phambi kokutshintsha inapukeni.
Tshintsha inapukeni uze umcoce umntwana.
Lilahle inapukeni kunye nezosuli ezingcolisekileyo emgqomeni.
Mnxibise inapukeni elitsha.
Coca umphezulu wenapukeni.
Hlamba izandla zomntwana.
Ukumhlamba, ukumtyisa kunye nokubafunqula abantwana
Ababoneleli bonakekelo lwabantwana kufuneka banxibe impahla enemikhono emide kwaye kufuneka banxibe iaproni phezu kwempahla zabo ukuba kunokwenzeka oko. Zimele zibotshwe iinwele zize zigcinwe kude nobuzo.
Ukongeza ekuhlambeni izandla, ababoneleli ngonakekelo lwabantwana kufuneka bahlambe ubuso babo, intamo kunye nayiphi na enye indawo enokuthi ihlangane nokukhuthswa ngumntwana (umz. umfinya, iinyembezi, amathe)
Ukuba umntwana uyithafele impahla yakhe, kufuneka umboneleli wonakekelo lomntwana amtshintshe iimpahla umntwana.
Ukuba zithafelwe iimpahla/iaproni yomboneleli wonakekelo lomntwana, kufuneka umboneleli wonakekelo atshintshe impahla/iaproni yakhe.
Kufuneka abazali/abanakekeli bahambise ngeempahla ezininzi ekhretshi ngosuku kwaye nabo ababoneleli bonakekeli lwabantwana bafanele babe nezabo iimpahla ezininzi zokutshintsha ngosuku.